ဗုဒ္ဓတရားတော်များ: 6/1/08 - 7/1/08
Posted by U Lawkanartha at 6/30/2008 03:22:00 PM Links to this post
၁။ သဗ္ဗေသတ္တာ၊ ဝေနေယျာ၊ သံသာရှည်လှပြီ။
၂။ အတည်ကျကျ၊ ဘယ်ဘဝ၊ ရကြမရှိပြီ။
၃။ ရအံ့နိုးနိုး၊ လောဘမျိုး၊ အကျိုးယုတ်လှပြီ။
၄။ သုံးပါးညီးညီး၊ လောင်မီးကြီး၊ ဖိစီးလှလေပြီ။
၅။ လောင်မှန်းမသိ၊ မောဟဖိ၊ မိုက်မိလှလေပြီ။
၆။ ပိုးဖလံမျိုး၊ မီးကိုတိုး၊ ကိုယ်ကျိုးနည်းလှပြီ။
၇။ ကာမဂုဏ်မွဲ၊ သည်မိုက်ခဲ၊ မခွဲနိုင်ကြပြီ။
၈။ မခွဲနိုင်ကြ၊ လူ့ဗာလ၊ မိုက်စသိမ်းသင့်ပြီ။
၉။ ဂင်္ဂါသဲတူ၊ ပွင့်တော်မူ၊ ဆူဆူများလှပြီ။
၁ဝ။ များအသင်္ချေ၊ ရှင်စောတွေ၊ ရှောင်သွေလွဲခဲ့ပြီ။
၁၁။ တစ်ဆူမသင့်၊ တစ်ဆူသင့်၊ ဖူးခွင့်တွေ့ထိုက်ပြီ။
၁၂။ မတော်မတရား၊ ကျင့်ဖောက်ပြား၊ မိုက်အားကြီးလှပြီ။
၁၃။ အလိုမလိုက်၊ သည်အမိုက်၊ ပယ်ထိုက်သင့်လှပြီ။
၁၄။ မပယ်မချိုး၊ ဆင်ကန်းတိုး၊ ဟုတ်နိုးထင်လှပြီ။
၁၅။ ဟုတ်နိုးသမှု၊ ထင်တိုင်းပြု၊ ယခုတိုင်ခဲ့ပြီ။
၁၆။ တရားလက်လွတ်၊ ငှက်တောင်ကျွတ်၊ ဝဋ်နှင့်မကင်းပြီ။
၁၇။ မနုဿတ္တ၊ ဒုလ္လဘ၊ မရများလေပြီ။
၁၈။ အရတော်စွ၊ သည်ဘဝ၊ လှလှကျင့်ထိုက်ပြီ။
၁၉။ ကြုံကြိုက်တော်စွာ၊ သာသနာ၊ ရောင်ဝါထွန်းလှပြီ။
၂ဝ။ သတိရရ၊ မြတ်ပုည၊ ပြုရကောင်းသင့်ပြီ။
၂၁။ တစ်နေ့တစ်နေ့၊ နက်ဖြန်ရွေ့၊ မမေ့ကောင်းသင့်ပြီ။
၂၂။ ငါ့ကိုယ်ငါ့သား၊ ငါ့မယား၊ ထင်မှားလှလေပြီ။
၂၃။ ထင်မှားတတ်စွာ၊ သက္ကာယာ၊ မိစ္ဆာကင်းသင့်ပြီ။
၂၄။ ငါးခုခန္ဓာ၊ ရုပ်နာမ်မှာ၊ မှန်စွာမှတ်သင့်ပြီ။
၂၅။ သမ္မသန၊ ဉာဏ်အစ၊ ထင်လှသင့်ကြပြီ။
၂၆။ နင်ဖြင့်နင့်ကိုယ်၊ ဆုံးမ, ဆို၊ နင့်ကိုယ်အမှုသည်။
၂၇။ နင်မဆုံးမ၊ နင့်တာပ၊ ဘယ်ကခံလိမ့်မည်။
၂၈။ နှလုံးဖုံဖုံ၊ ထုံတုံတုံ၊ နင့်ပုံကြော့ကြမ်းသည်။
၂၉။ နင်နှင့်နင့်ကံ၊ စီရင်ဖန်၊ အမှန်ဖြစ်တော့သည်။
၃ဝ။ ယခုနင့်ကိုယ်၊ နင့်အလို၊ ဘယ်ကိုပြည့်စုံသည်။
၃၁။ နင့်ကိုယ်နင်နှစ်၊ နင့်အပြစ်၊ နင်ဖြစ်ခံရမည်။
၃၂။ နင့်ကိုယ်နင့်အား၊ နင်မသနား၊ နင်မှားရှာတော့မည်။
၃၃။ ဒါနသီလာ၊ ဘာဝနာ၊ နင်သာပြုသင့်သည်။
၃၄။ ဇာတိဇရာ၊ မရဏာ၊ မကြာနင်တွေ့မည်။
၃၅။ မျက်တောင်တစ်ယှက်၊ လျှပ်တစ်ပြက်၊ နင့်သက်သေလိမ့်မည်။
၃၆။ ဘယ်နှစ်ဘယ်လ၊ ရောက်ခါမှ၊ ကာလမရွေးပြီ။
၃၇။ ကြီးငယ်မဟူ၊ ကိုယ်ရွယ်တူ၊ ခုမူသေလှပြီ။
၃၈။ အမှန်သေရိုး၊ ထိုလူမျိုး၊ ကြောက်စိုးရွံ့သင့်ပြီ။
၃၉။ မသွင်းနှလုံး၊ အထင်ရှုံး၊ ပျက်ပြုံးလှလေပြီ။
၄ဝ။ ခန္ဓာကြွေလျော်၊ ရှိပြန်သော်၊ ပူဇော်ကောင်းလှပြီ။
၄၁။ သွားကျိုးဆံဖြူ၊ ရှိပါမူ၊ ဘယ်သူမကြောက်ပြီ။
၄၂။ ဤသည့်မယား၊ ဤသည့်သား၊ မီးပွားမှန်တော့သည်။
၄၃။ ခယဝယ၊ ဘိဇ္ဇန၊ ပျက်ကြလှလေပြီ။
၄၄။ အပ္ပိယေဟိ၊ ပိယေဟိ၊ ဒုက္ခိကြုံလေပြီ။
၄၅။ ဒုက္ခအထွေထွေ၊ တပေပေ၊ ခံနေရလေပြီ။
၄၆။ နိဗ္ဗာန်သာခေါင်၊ ဘေးမဲ့သောင်၊ ရောက်အောင်ပြုသင့်ပြီ။
၄၇။ မပြုပါဘဲ၊ နင်ရှောင်လွဲ၊ နင်ပဲမိုက်လှသည်။
၄၈။ ယုတ္တိယုတ္တာ၊ နင်ဆင်ကာ၊ ဟန်သာနင်များသည်။
၄၉။ ဘုးရားသွားသွား၊ ကျောင်းသွားသွား၊ စိတ်ထားနင်မကြည်။
၅ဝ။ ဒါနသီလာ၊ နင်ပြုခါ၊ စေတနာဇောမကြည်။
၅၁။ သို့ပင်ပြုလို၊ နင့်ကုသိုလ်၊ ဘယ်ကိုသွားလိမ့်မည်။
၅၂။ လောကုတ္တရာ၊ မြိုက်သြဇာ၊ နင်သာဝေးလှသည်။
၅၃။ ဇောစိတ်သန်သန်၊ ကုသိုလ်မှန်၊ နင်ကြံပြုရမည်။
၅၄။ သို့ပြုမှသာ၊ သည့်ခေမာ၊ နင်သာနီးရမည်။
၅၅။ ဤသို့စုံစေ့၊ ပြန်လှန်၍၊ စေ့စေ့နှလုံးတည်။
၅၆။ အနမတဂ္ဂ၊ သံသာရ၊ ကြာလှလေကုန်ပြီ။
၅၇။ ဂင်္ဂါဝါဠု၊ ပမာပြု၊ သဲစုမကပြီ။
၅၈။ တဏှာ၏နောက်၊ တကောက်ကောက်၊ လိုက်ထောက်မသင့်ပြီ။
၅၉။ တဏှာမြစ်မ၊ ပင်လယ်ဝ၊ နစ်ကြလေကုန်ပြီ။
၆ဝ။ တဏှာလည်းပွား၊ ဒုက္ခများ၊ သွား၍မဆုံးပြီ။
၆၁။ တဏှာပို့တင်၊ ပါယ်လေးခွင်၊ လျင်စွာရောက်လေပြီ။
၆၂။ သေမင်းနိုင်ငံ၊ အဖန်ဖန်၊ လိုက်ပြန်ရလေပြီ။
၆၃။ ဝေဘူတောင်မျှ၊ ပမာပြ၊ အရိုးမကပြီ။
၆၄။ နစ်တုံပေါ်တုံ၊ သုံးပါးဘုံ၊ ကြုံပြန်ရလေပြီ။
၆၅။ ချမ်းသာမငွေ့၊ ဆင်းရဲတွေ့၊ ငြီးငွေ့သင့်လှပြီ။
၆၆။ အဝိဇ္ဇန္ဓ၊ သည်မောဟ၊ ညှဉ်းဆဲလှပေပြီ။
၆၇။ နီဝရဏ၊ ဆီးတားကြ၊ လမ်းစမဆုံးပြီ။
၆၈။ ဂတိငါးပါး၊ ဆုံလည်နွား၊ သွား၍မဆုံးပြီ။
၆၉။ ဘဝတိုင်းသေ၊ သင်္ချိုင်းမြေ၊ ပွားစေလှလေပြီ။
၇ဝ။ လမ်းကောက်လည်းသွား၊ လူအများ၊ အမှားကြိုက်ခဲ့ပြီ။
၇၁။ လမ်းကြောင်းမမှန်၊ မြတ်နိဗ္ဗာန်၊ ဧကန်လွဲခဲ့ပြီ။
၇၂။ ဘဝမဆုံး၊ ဒုက္ခတုံး၊ လုံးလုံးခံရပြီ။
၇၃။ လောကမျက်ရှု၊ သဗ္ဗညု၊ ယခုရှိရဲ့မင်း။
၇၄။ ဘုရားဖြစ်ခါ၊ သာသနာ၊ ရောင်ဝါတဝင်းဝင်း။
၇၅။ မနုဿတ္တ၊ ဒုလ္လဘ၊ ရအောင်ခဲကြမင်း။
၇၆။ ဗြဟ္မာ့ပြည်က၊ အပ်ကိုချ၊ မြေကအပ်တစ်စင်း။
၇၇။ အပ်သွားခြင်းသာ၊ ထိဖွယ်ရာ၊ ပမာမှတ်ကြမင်း။
၇၈။ နိယျာနိက၊ မြတ်ဓမ္မ၊ ကြားရခဲ၏မင်း။
၇၉။ သဒ္ဓါဗလဝ၊ ဒုလ္လဘ၊ ရအောင်ခဲကြမင်း။
၈ဝ။ အရတော်ခိုက်၊ လူတစ်သိုက်၊ ခဲလိုက်ကြကုန်မင်း။
၈၁။ ကိုယ့်ဖို့မရ၊ သည်နောင်တ၊ ဖြစ်တတ်ကြ၏မင်း။
၈၂။ ဤသို့ဘဝ၊ ဖြစ်သမျှ၊ ရမည်ခဲ၏မင်း။
၈၃။ ထူးမြတ်စွာလှ၊ လူ့ဘဝ၊ နှမြောကြကုန်မင်း။
၈၄။ မြတ်သည်ကိုမှ၊ မသိကြ၊ ဗာလနှလုံးသွင်း။
၈၅။ ဗာလဖြစ်က၊ လူ့ပါပ၊ ကြာကြကုန်ပြီမင်း။
၈၆။ လူဖြစ်ကျိုးမှ၊ မခံရ၊ ရှုံးလှချေ၏မင်း။
၈၇။ ဘဝတိုင်းရှုံး၊ လူ့ကျောက်တုံး၊ စုန်းစုန်းမြုပ်၏မင်း။
၈၈။ စုန်းစုန်းမြုပ်ခါ၊ မပေါ်လှာ၊ ကြမ္မာမှောက်၏မင်း။
၈၉။ နိဗ္ဗာန်လမ်းစ၊ ဤသို့ပြ၊ မှတ်ကြနှလုံးသွင်း။
၉ဝ။ ကလျာဏမိတ္တ၊ ပဏ္ဍိတ၊ ပေါင်းဖေါ်ရ၏မင်း။
၉၁။ ထိုကလျာဏ၊ ဆိုဆုံးမ၊ လိုက်နာရ၏မင်း။
၉၂။ ယောနိသောမန၊ သိကာရ၊ နေ့ညနှလုံးသွင်း။
၉၃။ သီလဓုတင်၊ ဆောက်တည်လျှင်၊ သည်တွင်အစမင်း။
၉၄။ အလောဘ အဒေါသ အမောဟ နိက္ခမ ဝိဝေက နိဿရဏ၊
၉၅။ ရွှေပြည်သနစ်၊ သာသည့်ခေတ်၊ စိစစ်ကြကုန်မင်း။
၉၆။ ရွှေပြည်ချမ်းသာ၊ စံချင်ရှာ၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာသို့ချဉ်း။
၉၇။ အနိစ္စကောင်၊ ဒုက္ခကောင်၊ အနတ္တကောင်၊
၉၈။ အနိစ္စတုံး၊ ဒုက္ခတုံး၊ အနတ္တတုံး၊ အသုဘတုံး၊ လုံးလုံးနှလုံးသွင်း။
၉၉။ ဤသို့ထင်မှ၊ မဂ်လမ်းစ၊ ရမည်မှတ်စင်းစင်း။
၁ဝဝ။ မဂ္ဂင်ဖေါင်ကြီး၊ တက်၍စီးမှ၊ ပြည်ကြီးအမတ၊ နိရောဓ၊ ရမည်မှတ်ကြမင်း။
၁ဝ၁။ ယခုဘဝ၊ မသိကြမူ၊ အမတမည်ခေါ်၊ ရွှေပြည်တော်၊ အစော်မနံလျှင်း။
Posted by U Lawkanartha at 6/27/2008 08:54:00 PM Links to this post
နောင်တ ဆယ်ပါး တရားကြည်ညို
Posted by U Lawkanartha at 6/25/2008 09:25:00 PM Links to this post
ဓမ္မဒေသနာ သိက္ခာပုဒ် မာတုဂါမ(အမျိုးသမီး)အားတရားဟောမှု
စွာဘုရားရှင် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်း သုံးတော်မူစဉ် အသျှင်ဥဒါယီသည် နံနက်အချိန် ယောက္ခမကြီးနှင့် ချွေးမတို့သာရှိသောအိမ်သို့ သွား၏။ ယောက္ခမသည် အိမ်၏တံခါးမှ ထိုင်နေ၏။ ချွေးမဖြစ်သူသည် တိုက်ခန်း တံခါးဝမှာ ထိုင်နေ၏။
အသျှင်ဥဒါယီသည်ရှေးဦးစွာ ယောက္ခမကြီးထံ သွား၍ နားအနီးသို့ကပ်ပြီးလျှင် တီးတိုးတရားဟောရာ ချွေးမ၏စိတ်ထဲ''ဤရဟန်းသည် ငါ့ယောက္ခမ၏ လင်ငယ် လေလော၊ သို့တည်းမဟုတ် ပြက်ရယ်စကားကိုပင် ပြောလေသလော''ဟု ယုံမှား သံသယဖြစ်၏။
တစ်ဖန် ချွေးမအနီးသို့သွားပြီးလျှင် နားအနီးသို့ကပ်၍ တီးတိုးတရားဟောပြန်၏။ ထိုအခါ ယောက္ခမ၏ စိတ်ထည်း၌ ''ဤရဟန်းသည် ငါ့ချွေးမ၏လင်ငယ်လေ လော၊ သို့တည်းမဟုတ် ပြက်ရယ်စကားကိုပင် ပြောလေသလော''ဟု ယုံမှား သံသယဖြစ်၏။
အသျှင်ဥဒါယီပြန်သွားသောအခါ ချွေးမနှင့်ယောက္ခမတို့ အချင်းချင်း မေးမြန်းကြ ရာ တရားစကားပြောဟောခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသဖြင့် ''တရားဆိုလျှင် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဟောထိုက်ပါလျက် အသျှင်ဥဒါယီသည် အဘယ့်ကြောင့် နားရင်းကပ် ၍ တီးတိုး ဟောရသနည်း''ဟု ကဲ့ရဲ့ကြလေ၏။ ယင်းအကြောင်းကို ဘုရားရှင် ကြားသိတော်မူ၍ ''မာတုဂါမ(အမျိုးသမီး)အား တရားမဟောရ''ဟု ပညတ်တော် မူသည်။
လုံးဝ တရားမဟောဘဲ နေကြရာ ဥပါသိကာမ(အမျိုးသမီး)တို့က ''ငါးခွန်း ခြောက်ခွန်းလောက်တော့ ဟောတော်မူကြပါ၊ ဤမျှလောက်ဟောလျှင် တပည့် တော်မတို့ သိနိုင်ကြပါသည်''ဟု တောင်းပန်ကြသော်လည်း ရဟန်းတို့က လုံးဝ တရား မဟောသောကြောင့် ဥပါသိကာမ(အမျိုးသမီး)တို့က ကဲ့ရဲ့ကြလေသည်။
ယင်းအကြောင်းကို ရဟန်းတို့ကြား၍ ဘုရားရှင်အား လျှောက်ထားကြသော ကြောင့် ''ငါးခွန်း၊ ခြောက်ခွန်းထက် ပိုလွန်မဟောရ''ဟု အနုပညတ် ထပ်တော် မူသည်။
တစ်ဖန် ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းတို့သည် ဘာမျှနားမလည်သော ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို အနားထားပြီး ထိုယောက်ျားကို ဟောလေဟန်ဖြင့် မာတုဂါမ(အမျိုးသမီး)များ အား တရားဟောကြပြန်၏။ ထိုအကြောင်းကို ရဟန်းများက ဘုရားရှင်အား လျှောက်ထားသောအခါ ''မာတုဂါမ(အမျိုးသမီး)အား ငါးခွန်း၊ ခြောက်ခွန်းအထိ တရားဟောလျှင် သိနားလည်သော ယောက်ျားတစ်ယောက် အနီးရှိရမည်''ဟု ပညတ်တော်မူသည်။
ယော ပန ဘိက္ခု မာတုဂါမဿ ဥတ္တရိဆပ္ပဉ္စဝါစာဟိ ဓမ္မံ ဒေသေယျ အညတြ ဝိညုနာ ပုရိသဝိဂ္ဂဟေန၊ ပါစိတ္တိယံ။
ယော ပန ဘိက္ခု၊ အကြင်ရဟန်းသည်။
ဥတ္တရိဆပ္ပဉ္စဝါစာဟိ၊ ငါးပုဒ်ခြောက်ပုဒ်ထက်လွန်သော စကားတို့ဖြင့်။
ဓမ္မံ၊ ပါဠိ အဋ္ဌကထာ ဓမ္မကို။
တဿ ဘိက္ခုနော၊ ထိုရဟန်းအား။
ဤသိက္ခာပုဒ်၌ တရားဟောသည်ဆိုရာဝယ် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဟောပြောသည် ကို မဆိုလို၊ ပါဠိတော် အဋ္ဌကထာ ဂါထာစုဏ္ဏိယများကို ပါဠိဘာသာဖြင့် ရွတ် ဖတ်ဟောပြောခြင်းကို ဆိုလို၏၊ မြန်မာလိုသက်သက် ရှင်းလင်း ဟောပြခြင်း ကြောင့် အပြစ်မရှိ၊ သရဏဂုံနှင့် သီလကိုပေးရာ၌ ပါဠိဘာသာဖြင့် ပေးသော် လည်း တရားဟောသည့် သဘောမသက်ဝင်သောကြောင့် အာပတ်မသင့်ဟု ((ဆရာမြတ်))တို့ မိန့်ဆိုကြ၏။
Posted by U Lawkanartha at 6/25/2008 08:57:00 PM Links to this post
၁။ မြတ်စွာဘုရားနှင့် သိကြားဗြဟ္မာ၊ ပစ္စေကနှင့် အဂ္ဂသာဝကာ၊
ကွေကွင်း သေခြင်း မငြင်းနိုင်ရှာ၊ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တာ။
၂။ ကောင်းကင် မြေမိုး ပျံလျှိုးနိုင်စွာ၊ အသိဉာဏ်စွမ်း လျှမ်းလျှမ်းဖြာဖြာ၊
၃။ စကြာမာရ်နတ် မင်းမြတ်ရာဇာ၊ ရေမြေပိုင်သ စိုးရဖြာဖြာ၊
၄။ ရွှေ ငွေ ဘောဂ ပေါပြည့်လှစွာ၊ သူကြွယ်,သူဌေး ပဂေးများစွာ၊
၅။ ဂုဏ်ရှိမရှိ များဘိလှစွာ၊ ရုပ်ရည်လှပ မလှလေရာ၊
၆။ ဆွေမျိုးမိဘ များလှသူငါ၊ သမီး သားနှင့် မြေးများဖြာဖြာ၊
၇။ မီးရထားနှင့် စီးသွားပုံပမာ၊ သေမင်းလက်တွင်း သက်ဆင်းရရှာ၊
ဘဝပြောင်းလို့ အဟောင်းစွန့်ကာ၊ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တာ။
၈။ အဟောတဝ လောကဘုံမှာ၊ တွေ့ဆုံကြုံကွဲ မလွဲနိုင်ရှာ၊
မုချဒုက္ခ ရှုပ်စွသူငါ၊ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တာ။
၉။ ဆုံလိုက်ကြုံလိုက် ဘုံ၌ဖြစ်ခါ၊ မိဘ,သားသမီး အများကြီးဖြစ်လာ၊
တစ်နေ့ကြတော့ ကွဲရလေရှာ၊ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တာ။
Posted by U Lawkanartha at 6/25/2008 07:45:00 PM Links to this post
၁ * ဘုရားပွင့့််ရာ၊ သာသနာ၊ ကြုံတာ ဘဝမြတ်
၂ * လမ်းညွှန်ပေးငြား၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကြုံငြား ဘဝမြတ်။
၃ * တရားရှိရာ၊ အရပ်မှာ၊ ဖြစ်တာ ဘဝမြတ်။
၄ * အင်္ဂါကြီးငယ်၊ ပြည့်စုံကြွယ၊် ခန့်ထယ် ဘဝမြတ်။
၅ * လိမ္မာသွက်လက်၊ လွန်ထက်မြက် မြင့်တက် ဘဝမြတ်။
၆ * ကုသိုလ်ဆန္ဒ၊ လွန်ပြင်းပြ၊ မြင့်လှ ဘဝမြတ်။
* အကောင်း (၆)ဖြာ၊ ပြည့်စုံပါ၊ မြင့်တာ ဘဝမြတ်။
* ဂုဏ်ရည်ထွန်းတောက်၊ လူတစ်ယောက် အံ့လောက် ချီးမွမ်းအပ်။
* စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လမ်းဖွင့် ကြိုးစားအပ်။
Posted by U Lawkanartha at 6/24/2008 08:35:00 PM Links to this post
စေတသိက်တရား ၅၂-ပါး လင်္ကာများ-
''စေတသိက်တရား ၅၂-ပါး လင်္ကာများ''
ရုပ်ဓါတ်သဖွယ်၊ ကပ်ငြိတွယ်လျက်၊ ဘယ်ဝယ်ထိပုံ၊ မရှိတုံလည်း၊
အာရုံထိမိ၊ ဓါတ်ခိုက်ဘိ၊ တွေ့ထိ ဖဿ သဘောတည်း။
ဘုရင်မင်းနှယ်၊ ပွဲတော်တယ်သို့၊ သွယ်သွယ်အာရုံ၊ ရသာစုံကို၊
ကုန်အောင်မှန်ငြား၊ ချန်မထား၊ ခံစား ဝေဒနာ သဘောတည်း။
သူငယ်လက်သမား၊ မှတ်သည့်လားသို့၊ အမှားလည်းရှိ၊ အမှန်ရှိ၍၊
မှတ်မိရုံသာ၊ သိသည်မှာ၊ သညာ သဘောတည်း။
လယ်ပိုင်ရှင်ကြီး၊ တပည့်ကြီးတို့၊ ထုံးနည်းပုံကပ်၊ အာရုံရပ်၌၊
စေ့စပ်စေမှု၊ ဆော်သြပြု၊ မှတ်ရှု စေတနာ သဘောတည်း။
လေငြိမ်သည့်ဌာန်၊ မီးအလျှံသို့၊ မပျံ့မလွင့်၊ ဆင့်ကာဆင့်ကာ၊ ယူမိရာတွင်၊
စိတ်စဉ်တည်မှု၊ အကြောင်းပြု၊ မှတ်ရှု ဧကဂ္ဂတာတည်း။
ကြာစောင့်ရေနှယ်၊ အထိန်းသယ်နှင့်၊ လှေငယ်လှော်သူ၊ ပုံယူယှဉ်စပ်၊
သဟဇာတ်တို့၊ မပြတ်အောင်တည်၊ အသက်ရှည်ကြောင်း၊ တရားကောင်း၊
ဇာနည်မြင်းများ၊ ဖြောင့်ဖြောင့်သွားဖို့၊ ရထားထိန်းပုံ၊ များအာရုံကို၊
ထိုထိုစိတ်၌၊ မဆိတ်စေလျှင်း၊ ပြုပေးခြင်း၊ မယွင်း မနသိကာရတည်း။
မင်းကျွမ်းဝင်သူ၊ ပမာယူလော့၊ အတူယှဉ်ဖက်၊ အာရုံထက်သို့၊
တက်ရောက်စေလျှင်း၊ ကြံစည်ခြင်း၊ မယွင်း ဝိတက် သဘောတည်း။
ကြေးညီးသံနဲ၊ ငှက်ပျံဝဲသို့၊ ဖန်လဲအာရုံ၊ သုံးသပ်ပုံ၊
တံခါးတိုင်ကြီး၊ ယိုင်မလဲသို့၊ ခိုင်ဖြည်းတည့်မတ်၊ ဆုံးဖြတ်တတ်၊
မယိမ်းမယိုင်၊ ခိုင်စေသောအား၊ ထောက်တိုင်ကျားသို့၊
တရားယှဉ်ဖက်၊ ကြွကြွ တက်ရန်၊ အားအံခဲသဖြင့်၊ ရဲရင့်သသူ၊ ဖြစ်ကြောင်းဟူ၊
မှတ်ယူ ဝီရိယ သဘောတည်း။
ခရီးမောပန်း၊ တောစခန်း၌၊ အေးချမ်းကြည်လင်၊ ရေကိုမြင်၍၊
ကြည်ရွှင်သောလား၊ ကိုယ်စိတ်များကို၊ တိုးပွားစေလျက်၊ လွန်နှစ်သက်၊
မှတ်ချက် ပီတိ သဘောတည်း။
မြင်လိုကြားလို၊ နမ်းရှူလို၊ ရသာခံစား၊ ထိသိလိုငြား၊ မှတ်သား ဆန္ဒ လက္ခဏာ၊
တဏှာမပါ၊ လိုချင်တာ၊ ဆန္ဒ သဘောသာ။
သဘောမှန်ရာ၊ ဖုံးကွယ်ကာ၍၊ ပညာစက္ခု၊ ကန်းအောင်ပြုလျှင်း၊ မိုက်မဲခြင်း၊
မယွင်း မောဟ သဘောတည်း။
ရွာသူတို့ဝက်၊ မစင်ဗွက်ကို၊ မစက်ဆုပ်အား၊ မရှက်အားသို့၊ များဒုစရက်၊
ပြုဖို့ချက်မှ၊ မရှက်သသူ၊ ဖြစ်ကြောင်းဟူ၊ မှတ်ယူ အဟိရိကတည်း။
ပိုးပရန်မျိုး၊ မီးလျှံတိုးသို့၊ အကျိုးကိုထောက်၊ ရွံ့ကြောက်စဖွယ်၊
သွယ်သွယ် ဒုစရက်၊ ပြုဖို့ချက်မှ၊ သက်သက်မရွံ့၊ အရဲစွန့်၊ ပြုဝံ့ နောတ္တပ်တည်း။
လေဟုန်အရှိန်၊ ရေမငြိမ်သို့၊ မငြိမ်မသက်၊ အထက်ထက်၌၊
လွင့်တက်တတ်ရှောင်း၊ စိတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မကောင်း ဥဒ္ဓစ္စ သဘောတည်း။
မျောက်နှဲစေးပုံ၊ မခွာတုံသို့၊ အာရုံငြိကပ်၊ မခွာလတ်ဘဲ၊ တပ်မက်ခင်မင်၊
လိုချင်တတ်သော၊ ဤသဘော၊ မှတ်လော လောဘတည်း။
အမှန်တရား၊ ဉာဏ်အလားသို့၊ အမှားကိုပင်၊ အမှန်ထင်၍၊
သိမြင်ယူမှား၊ သဘောထား၊ မှတ်သား ဒိဋ္ဌိတည်း။
အများထက်ချွန်၊ စိတ်နေလွန်၍၊ တံခွန်အလား၊ ငါတကားဟု၊ ထောင်လွှား
ပြုလျက်၊ ကြွကြွတက်လျှင်း၊ မှတ်ထင်ခြင်း၊ မယွင်းမာန သဘောတည်း။
မြွေဟောက်တမျှ၊ ထောင်းထောင်းထလျက်၊ ယှဉ်ဖက် စိတ်ဓာတ်၊ ကိန်းဝပ်မိရာ၊
သတ္တဝါကို၊ ပူဆာစေလျှင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ မယွင်း ဒေါသ သဘောတည်း။
ပရမ္ပရ၊ ကံကောင်း မသဖြင့်၊ ပြည့်ဝဂုဏ်သိရ်၊ သူ့စည်းစိမ်ကို၊ မမြိန်နိုင်တောင်း၊
စောင်းမြောင်း မဲ့ရွဲ့၊ ကဲ့ရဲ့ ငြူစူ၊ ရှုတ်ချမူ၊ မှတ်ယူ ဣဿာ သဘောတည်း။
ရလတ္တံ့ ရပြီး၊ ငါ့ပစ္စည်းနှယ်၊ အံ့ချီးဖွယ်ကား၊ များကြွယ် သူတစ်ပါး၊ မဖြစ်စေ
သားဟု၊ ဖြစ်ပွားတတ်လျှင်း၊ ဝန်တိုခြင်း၊ မယွင်း မစ္ဆရိယ သဘောတည်း။
ပြုပြီးဒုစရိုက်၊ မပြုလိုက်မိ၊ သုစရိအတွက်၊ စက်ဆုပ်အပ်စွာ၊ ကိရိယာဟု၊
နောင်ခါတစ်ဖန်၊ ပူပန်တည်သော၊ ထိုသဘော၊ မှတ်လော ကုက္ကုစ္စ။
စိတ်စက်မခန့်၊ အနေညံ့အောင်၊ ဖိဟန့်တတ်သော၊ ထိုသဘော၊
စေတသိက်တရား၊ မခံ့ညားအောင်၊ ဟန့်တားတတ်သော၊ ထိုသဘော၊
သဘောအမှန်၊ စူးစမ်းပြန်လျှင်၊ ဉာဏ်မနိုင်ဘဲ၊ ဆင်းရဲကြောင်းဟု၊ ယုံမှားမှု၊
ရတနာသုံးတန်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်၊ သံသရာမျိုး၊ ကံအကျိုးတို့၊ ရှိရိုးဟုမြင်၊
သက်ဝင်ကျေနပ်၊ ယုံကြည်တတ်၊ မှတ်လေ သဒ္ဓါ သဘောတည်း။
ဘုရားစသား၊ အာရုံများ၌၊ မှတ်သားလေ့များ၊ အောက်မေ့ငြား၊
တရား သတိ သဘောတည်း။
ဒုစရိုက်ဆိုး၊ အမိုက်မျိုးမှ၊ ရှက်စနိုးမူ၊ ဟိရီဟူ၊ ကြောက်မူ သြတ္တပ်သဘောတည်း။
လောကီအာရုံ၊ ကာမဂုဏ်ကို၊ စုံစုံမက်မက်၊ နှစ်သက်မရှိ၊ မကပ်ငြိပေ၊ မလိုပေ၊
ဆိုလေ အလောဘ သဘောတည်း။
၃၃၊ အဒေါသ၊ (မေတ္တာ)
ယှဉ်ဘက်စိတ်ဓာတ်၊ ကိန်းဝပ်မိရာ၊ သတ္တဝါကို၊ ကြည်သာရွှင်ပြ၊
အေးမြစေသော၊ ထိုသဘော အဒေါသ သဘောတည်း။
ကိုယ်စီကိစ္စ၊ ရွက်ဆောင်ကြသဖြင့်၊ သမ္ပယုတ်ဆို၊ များထိုထိုဝယ်၊
အလယ်အလတ်၊ တည့်မတ်အောင်ûပ၊ လစ်လျူရှု၊ ခေါ်မှု မဇ္ဈတ္တတာတည်း။
ဥဒ္ဓစ္စစေ၊ ပြဌာန်းပေသည့်၊ ကိလေသာဟူ၊ အပူဆိတ်သဖြင့်၊ စေတသိက်အပေါင်း၊
ငြိမ်းအေးကြောင်းကို၊ ကာယဆိုဘိ၊ စိတ်၏အေးမြ၊ ဖြစ်ကြောင်းပြ စိတ္တပဿဒ္ဓိ။
ထိနမိဒ္ဓ၊ ပဋ္ဌာနပေ၊ များကိလေရိပ်၊ မယှဉ်ဆိတ်သဖြင့်၊ စေတသိက်ပေါင်း၊
လျင်မြန်ကြောင်းကို၊ ကာယဆိုဘိ၊ စိတ်၏လျင်စွ၊ ဖြစ်ကြောင်းပြ၊
ဒိဋ္ဌိမာန၊ ပဋ္ဌာနပေ၊ ကိလေသာစု၊ မယှဉ်မှုကြောင့်၊ နူးညံ့ပျောင့်ပျောင်း၊
စေတသိက်ပေါင်းကို၊ ကာယဆိုဘိ၊ စိတ်၏နုစွ၊ ဖြစ်ကြောင်းပြ၊ စိတ္တမုဒုတည်း။
ကာမစ္ဆန္ဒ၊ ပဋ္ဌာနပေ၊ ကိလေသာဓာတ်၊ ကင်းစင်လတ်သဖြင့်၊ များမြတ်စုစု၊
ကုသိုလ်မှုဝယ်၊ ခံ့ထယ်ဘိတောင်း၊ စေတသိက်ပေါင်းကို၊ ကာယဆိုဘိ၊
စိတ်၏ ခံ့စွ၊ ဖြစ်ကြောင်းပြ၊ စိတ္တကမ္မဉ်တည်း။
အသဒ္ဓိယ၊ ပဋ္ဌာနပေ၊ ကိလေသာဓာတ်၊ ကင်းစင်ပြတ်သဖြင့်၊ များလတ်သီးသီး၊
ကုသိုလ်ပြီးဖို့၊ ပွန်းတီးလေ့လာ၊ မကျင်နာတောင်း၊ စေတသိက်ပေါင်းကို၊
ကာယ ဆိုဘိ၊ စိတ်၏လေ့လာ၊ မကျင်နာစွ၊ ဖြစ်ကြောင်းပြ၊ စိတ္တပါဂုဉ်တည်း။
မာယာ-သာဌေယ၊ ပဋ္ဌာနပေ၊ ကိလေသာဓာတ်၊ ကင်းစင်လတ်သဖြင့်၊
ဖြောင့်မတ်ဘိတောင်း၊ စေတသိက်ပေါင်းကို၊ ကာယဆိုဘိ၊
စိတ်၏ဖြောင့်စွ၊ ဖြစ်ကြောင်းပြ၊ စိတ္တဥဇုတည်း။
အသက်မွေးဖွယ်၊ မဆက်သွယ်ဘဲ၊ နှုတ်ဝယ်ဖြစ်ထိုက်၊
ဒုစရိုက်လျှင်၊ စွန့်ပယ်ကြဉ်၊ ခေါ်တွင် သမ္မာဝါစာတည်း။
အသက်မွေးဖွယ်၊ မဆက်သွယ်ဘဲ၊ ကိုယ်ဝယ်ဖြစ်ထိုက်၊
ဒုစရိုက်လျှင်၊ စွန့်ပယ်ကြဉ်၊ ခေါ်တွင် သမ္မာကမ္မန္တတည်း။
အသက်မွေးမှု၊ ကိုယ်နှုတ်ပြုဖို့၊ ရှေးရှုတိုက်ရိုက်၊
ဒုစရိုက်လျှင်၊ ပယ်ရှောင်ကြဉ်၊ ခေါ်တွင် သမ္မာအာဇီတည်း။
ဒုက္ခိတလျှင်၊ သတ္တဝါမြင်သော်၊ သူတော်စင်များ၊ စိတ်ခြောက်ခြား၍၊
သနားသမှု၊ လှုပ်အောင်ပြု၊ မှတ်ရှု ကရုဏာတည်း။
သုခိတလျှင်၊ သတ္တဝါမြင်သော်၊ သူတော်စင်များ၊ ဝမ်းမြောက်ငြား၊
မှတ်သား မုဒိ သဘောတည်း။
၅၂၊ ပညာ၊ (အမောဟ)
သူငယ် အသပြာ၊ မြင်သောအခါ၌၊ ညိုဝါအရွှေ၊ သိလေမှန်စွာ၊ အသပြာဟု၊ သေချာမသိ၊ ဂါမိကဟူ၊ ရွာသူမူကား၊ ဖြူဝါတစ်ထွေ၊ ညိုရွှေ၎င်း၊ တစ်ကြောင်း အသပြာ၊ သိရုံသာတည်း၊ တန်ရာအဂ္ဃ၊ မည်မျှအဖိုး၊ သိရိုးမရှိ၊ ဟေရညိက၊ နာမအမည်၊ ပန်းတိမ်သည်ကား၊ တပါးမကြွင်း၊ ခပင်းဥဿုံ၊ အလုံးစုံကို၊ အကုန်မှန်စွာ၊ သိလေရာ၏၊ သညာ ဝိညာဏ်၊ ပညာယှဉ်လျက်၊ ဤသုံးချက်နှင့်၊ ယထာက္ကမ၊ တူလေစွဟု၊ မိန့်ဟ ဋီကာဆိုသတည်း။
ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၊ မဟာဂန္ဓာရုံ။
Posted by U Lawkanartha at 6/24/2008 07:50:00 PM Links to this post
Labels: ဓမ္မလင်္ကာ, အဘိဓမ္မာပိဋက
ဓာရဏပရိတ်တော်သည် မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားကို အန္တရာယ်မပြုနိုင်သော ဂုဏ်တော် ၄-ပါး၊ အာဝေနိက ဂုဏ်တော် ၁၈-ပါးကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ဤဂုဏ်တော်များသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ သီးခြား ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်တော်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ အခြား မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်၌မျှ ဤဂုဏ်တော်မျိုးမရှိချေ။ ရဟန္တာနှင့် ပစ္စေကဗုဒ္ဓများ၌သော်မှ ဤဂုဏ်သတ္တိမျိုးမရှိကြ။ စင်စစ်အားဖြင့် ဓာရဏပရိတ်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ အာဝေဏိကဂုဏ်တော်တို့ကို ချီးကျူးပူဇော်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ကောင်းမြတ်သော စေတနာဖြင့် ဓာရဏပရိတ်တော်ကို ရွတ်ဖတ်ပါမူ အ,ကာလ မရဏမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်။
အ,ကာလမရဏဆိုသည်မှာ သူတစ်ပါးလက်နက်ဖြင့် သေရခြင်း၊ သူတစ်ပါး ပယောဂဖြင့် သေရခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန် များကိုက်ခဲ၍ သေရခြင်း၊ ချောက်ကမ်းပါးမှကျ ၍ သေရခြင်း၊ ကားမှောက်၍ သေရခြင်းစသည် ဥပစ္ဆေဒက ကံကြောင့်မသေရ မသေနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။
သတ္တဝါတိုင်း လူတိုင်းပင် တစ်နေ့နေ့၌ သေရမည်မှာ ဓမ္မတာဖြစ်သည်။
အ,ကာလမရဏမှ လွတ်မြောက်သည်ဟု ဆိုသည်မှာ ဥပစ္ဆေဒကကံကြောင့် မသေရ မသေနိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသဗ္ဗုဒ္ဓဿ။
အတီတံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော အပ္ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
ပစ္စုပ္ပန္နံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော အပ္ပဋိဟတံ ဉာဏံ။
ဣမေဟိ တီဟိ ဓမ္မေဟိ သမန္နာဂတဿ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော သဗ္ဗံ ကာယကမ္မံ ဉာဏပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏာနုပရိဝတ္တံ၊ သဗ္ဗံ ဝစီကမ္မံ ဉာဏပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏာနုပရိဝတ္တံ၊ သဗ္ဗံ မနောကမ္မံ ဉာဏပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏာနုပရိဝတ္တံ။
ဣမေဟိ ဆဟိ ဓမ္မေဟိ သမန္နာဂတဿ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော နတ္ထိ ဆန္ဒဿ ဟာနိ၊ နတ္ထိ ဓမ္မဒေသနာယ ဟာနိ၊ နတ္ထိ ဝီရိယဿ ဟာနိ၊ နတ္ထိ ဝိပဿနာယ ဟာနိ၊ နတ္ထိ သမာဓိဿ ဟာနိ၊ နတ္ထိ ဝိမုတ္တိယာ ဟာနိ။
ဣမေဟိ ဒွါဒသဟိ ဓမ္မေဟိ သမန္နာဂတဿ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော နတ္ထိ ဒဝါ၊ နတ္ထိ ရဝါ၊ နတ္ထိ အဖုဋံ၊ နတ္ထိ ဝေဂါယိတတ္တံ၊ နတ္ထိ အဗျာဝဋမနော၊ နတ္ထိ အပ္ပဋိ-သင်္ခါနုပေက္ခာ၊ ဣမေဟိ အဋ္ဌာရသဟိ ဓမ္မေဟိ သမန္နာဂတဿ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော၊ နမော သတ္တန္နံ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနံ။
နတ္ထိ တထာဂတဿ ကာယဒုစ္စရိတံ၊ နတ္ထိ တထာဂတဿ ဝစီဒုစ္စရိတံ၊ နတ္ထိ တထာဂတဿ မနောဒုစ္စရိတံ၊ နတ္ထိ အတီတံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတ္ထိ အနာဂတံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတ္ထိ ပစ္စုပ္ပန္နံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတ္ထိ သဗ္ဗံ ကာယကမ္မံ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏံ နာနုပရိဝတ္တံ၊ နတ္ထိ သဗ္ဗံ ဝစီကမ္မံ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏံ နာနုပရိဝတ္တံ၊ နတ္ထိ သဗ္ဗံ မနောကမ္မံ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏံ နာနုပရိဝတ္တံ၊
ဣမံ ဓာရဏံ အမိတံ အသမံ သဗ္ဗသတ္တာနံ တာဏံ လေဏံ သံသာရဘယ-ဘီတာနံ အဂ္ဂံ မဟာတေဇံ။
ဣမံ အာနန္ဒ ဓာရဏပရိတ္တံ ဓာရေဟိ ပါရေဟိ ပရိပုစ္ဆာဟိ။ တဿ ကာယေ ဝိသံ န ကမေယျ၊ ဥဒကေ န လဂ္ဂေယျ၊ အဂ္ဂိ န ဍဟေယျ၊ နာနာဘယ ဝိကော၊ န ဧကာဟာရကော၊ န ဒွိဟာရကော၊ န တိဟာရကော၊ န စတုဟာရကော၊ န ဥမ္မတ္တကံ၊ န မူဠှကံ၊ မနုေဿဟိ အမနုေဿဟိ န ဟိံသကာ။
တံ ဓာရဏပရိတ္တံ ယထာ ကတမေ၊ ဇာလော မဟာဇာလော၊ ဇာလိတ္တေ မဟာဇာလိတ္တေ၊ ပုဂ္ဂေ မဟာပုဂ္ဂေ၊ သမ္ပတ္တေ မဟာသမ္ပတ္တေ၊ ဘူတင်္ဂမှိ တမင်္ဂလံ။ ဣမံ ခေါ ပနာနန္ဒ ဓာရဏပရိတ္တံ သတ္တသတ္တတိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကောဋီဟိ ဘာသိတံ၊ ဝတ္တေ အဝတ္တေ၊ ဂန္ဓဝေ အဂန္ဓဝေ၊ နောမေ အနောမေ၊ သေဝေ အသေဝေ၊ ကာယေ အကာယေ၊ ဓာရဏေ အဓာရဏေ၊ ဣလ္လိ မိလ္လိ၊ တိလ္လိ မိလ္လိ၊ ယောရုက္ခေ မဟာယောရုက္ခေ၊ ဘူတင်္ဂမှိ တမင်္ဂလံ။
ဣမံ ခေါ ပနာနန္ဒ ဓာရဏပရိတ္တံ နဝနဝုတိယာ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကောဋီဟိ ဘာသိတံ၊ ဒိဋ္ဌိလာ ဒဏ္ဍိလာ မန္တိလာ ရောဂိလာ ခရလာ ဒုဗ္ဘိလာ။ ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန သောတ္ထိ မေ ဟောတု သဗ္ဗဒါ။
မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏အသက်ကို တစ်စုံတစ် ယောက်သောသူသည် ဘေးအန္တ-ရာယ် မပြုနိုင်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ သည် ဘေးအန္တရာယ်မပြုနိုင်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့အတွက် ရည်မှန်းထားသော ပစ္စည်းလေးပါးကို တစ်စုံတစ် ယောက်သောသူသည် ဘေးအန္တရာယ်မပြုနိုင်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ ရှစ်ဆယ်သောလက္ခဏာတော် တစ်လံမျှလောက်သော ရောင်ခြည်တော်ကို တစ်စုံ တစ်ယောက်သောသူသည် ဘေးအန္တရာယ်မပြုနိုင်။
ဤလေးပါးကို တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် အန္တရာယ်ပြုခြင်းငှာမတတ်နိုင်၊ ထို့အတူ အကျွန်ုပ်အား ဖြစ်ပါစေ။
ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားအား လွန်လေပြီး သောအဖို့၌၊ အဆီးအတားမရှိသော ဉာဏ်တော်သည်ဖြစ်၏။ ဘုန်းတော် ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားအား နောင်လာလတ္တံ့သော အနာဂတ်အဖို့၌၊ အဆီးအတား အပိတ်အပင်မရှိသော ဉာဏ်တော်သည်ဖြစ်၏။ ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားအား ပစ္စုပ္ပန် မျက်မှောက်ဖြစ်သော အဖို့၌၊ အဆီးအတား အပိတ်အပင်မရှိသော ဉာဏ်တော် သည်ဖြစ်၏။
ကျေးဇူးတရားသုံးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော၊ ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည်၊ အလုံးစုံသော ကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည် ဉာဏ်တော်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းရှိသည် ဉာဏ်တော်၏ နောက်သို့အစဉ်လိုက် သည်။ အလုံးစုံသော နှုတ်ဖြင့်ပြု အပ်သောအမှုသည် ဉာဏ်တော်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း ရှိသည် ဉာဏ်တော်၏နောက်သို့အစဉ်လိုက်သည်။ အလုံးစုံသော (မနော) စိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုသည် ဉာဏ်တော်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းရှိသည် ဉာဏ်တော်၏ နောက်သို့ အစဉ်လိုက်သည်။
ကျေးဇူးတရားခြောက်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော၊ ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည်၊ သတ္တဝါတို့၏ အကျိုးစီးပွားကိုပြု လိုသော ဆန္ဒသည်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိ။ တရားတော်ကို ဟောပြောရာ၌ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိ။ သူတစ်ပါးတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ လုံ့လဝီရိယသည် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိ။ သင်္ခါရတရားတို့ကို အနိစ္စ အစရှိသော လက္ခဏာသုံးပါးဖြင့် ရှုမှု ဝိပဿနာဉာဏ်သည် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိ။ စိတ်တည် ကြည်ခြင်း သမာဓိသည် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိ။ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ဝင်စားတော်မူ ခြင်း၌ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိ။
ကျေးဇူးတရား တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော၊ ဘုန်းတော်ခြောက်ပါး နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည်၊ ရယ်မြူးလို၍ ပြုမူပြောဆိုခြင်းမရှိ။ သတိလွတ်၍ ချွတ်ယွင်းပြုမူပြောဆိုခြင်းမရှိ။ ဉာဏ်တော်ဖြင့် မတွေ့မထိမသိအပ် သော တရားသည်မရှိ။ ဉာဏ်တော်ဖြင့် မဆင်မခြင် အဆောတလျင်ပြုမူခြင်း မရှိ။ သူတစ်ပါးအတွက် ကြောင့်ကြမဲ့သောစိတ်သည်မရှိ။ ဉာဏ်တော်ဖြင့် မဆင်မခြင် လျစ်လျူရှုသော အမှုသည်မရှိ။
ဤကျေးဇူးတရား တစ်ဆယ့်ရှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော၊ ဘုန်းတော်ခြောက် ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားအား၊ ရှိခိုးပါ၏။ ဝိပဿီ, သိခီ, ဝေဿဘူ, ကကုသန္ဓ, ကောဏာဂမဏ, ကဿပ, ဂေါတမ, ခုနှစ်ဆူသော မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့အား ရှိခိုးပါ၏။
ဝိပဿီအစရှိသော ရှေးဘုရားတို့ကဲ့သို့ လာခြင်းကောင်းတော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားသည် ကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော ''ကာယဒုစရိုက်မှု''သည် မရှိ။ နှုတ်ဖြင့်ပြု အပ်သော ''ဝစီဒုစရိုက်မှု''သည် မရှိ။ စိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော ''မနောဒုစရိုက်မှု'' သည် မရှိ။ လွန်လေပြီးသော ကာလ၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဆီးတားပိတ်ပင် သောဉာဏ်သည်မရှိ။ နောင်လာလတ္တံ့သောကာလ၌ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်အား ဆီးတားပိတ်ပင်သော ဉာဏ်သည်မရှိ။ မျက်မှောက်သောကာလ၌ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်အား ဆီးတားပိတ်ပင်သော ဉာဏ်သည်မရှိ။ မြတ်စွာဘုရားအား အလုံးစုံကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည် ဉာဏ်တော်ရှေ့ သွားမရှိခြင်းသည် မရှိ၊ ဉာဏ်တော်သို့ အစဉ်မလိုက်ခြင်းသည် မရှိ။ မြတ်စွာဘုရားအား အလုံးစုံနှုတ်ဖြင့် ပြုအပ်သော အမှုသည် ဉာဏ်တော်ရှေ့သွားမရှိခြင်းသည် မရှိ၊ ဉာဏ်တော်သို့ အစဉ်မလိုက်ခြင်းသည် မရှိ။ မြတ်စွာဘုရားအား အလုံးစုံစိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည် ဉာဏ်တော်ရှေ့သွားမရှိခြင်းသည်မရှိ၊ ဉာဏ်တော်သို့ အစဉ်မလိုက် ခြင်းသည် မရှိ။
ဤဆောင်ထားအပ်သော ဓာရဏပရိတ်တော်သည် နှိုင်းယှဉ်ရာ တူမျှရာမရှိ၊ ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့၏ မှီခိုကိုးကွယ်ရာလည်းဖြစ်၏။ ပုန်းအောင်းလဲလျောင်း ရာလည်းဖြစ်၏။ သံသရာဘေးကို ကြောက်တတ်သောသူတို့အတွက် အလွန် မြတ်သော အရံအတားဖြစ်၏၊ ကြီးသောတန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်ရှိသော အရံအတား ဖြစ်၏။
ချစ်သားအာနန္ဒာ ဤသို့တန်ခိုးတေဇော် အာနုဘော်ကြီးမြတ်သော ဓာရဏ ပရိတ်တော်ကို ရွတ်ဆောင်လော့၊ မှတ်သားလော့၊ မေးမြန်းစူးစမ်းဆင်ခြင်လော့။
ထိုသို့ မှတ်သား မေးမြန်း စူးစမ်းဆင်ခြင်သူ၏ကိုယ်၌ မြွေစသည်တို့၏အဆိပ် သည် မကျရောက်ရာ၊ ရေ၌ မနစ်မွန်းရာ၊ မီးသည်မလောင်ကျွမ်းရာ၊ အထူးထူးသော ဘေးရန်တို့သည် မကျရောက်ရာ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ သည် တစ်ရက်, နှစ်ရက်, သုံးရက်, လေးရက် မကောင်းမကြံနိုင်ရာ၊ ရူးသွပ်ပျံ့ လွင့်သော စိတ်ဝေဒနာလည်း မဖြစ်နိုင်ရာ၊ တွေဝေမိုက်မဲသော အနာလည်း မဖြစ်နိုင်ရာ၊ ဘီလူးတို့သည်လည်း မညှဉ်းဆဲမဖျက်ဆီး မနှိပ်စက်နိုင်ရာ။
ထိုဓာရဏပရိတ်တော်သည် အဘယ်နည်းဟူမူ၊ စကြဝဠာ ကမ္ဘာတစ်သောင်းကို လောင်ကျွမ်းစေသော နေခုနှစ်စင်း၏ အရှိန်အစော်ကဲ့သို့ ဘေးရန်အပေါင်း တို့ကို လောင်ကျွမ်းပယ်ဖြောက်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်ရှိ၏။ နတ်, သိကြား, နဂါး, ဂဠုန်, ကုမ္ဘဏ်, ဘီလူး, ရက္ခိုသ် အစရှိသည်တို့ကို တားမြစ်နိုင်သော တန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်ရှိ၏။ ရေ, မီး, မင်း, ခိုးသူ, မချစ်မနှစ်လိုသောသူဟု ဆိုအပ်သော ရန်သူအန္တရာယ်အပေါင်းကိုလည်း ဖယ်ရှားတားမြစ်နိုင် ၏။ ရောဂါဘေး, လက်နက်ဘေး, အစာငတ်မွတ်သည့် ဘေးဟုဆိုအပ်သော ကပ်သုံးပါးမှလည်း ကင်းလွတ် စေနိုင်၏။ အမိဝမ်းတွင်း၌ ပဋိသန္ဓေနေသော်လည်း ဆွံ့, အ, နားပင်း, ရူးသွပ်ခြင်း အနာရောဂါ ဘေးမှလွတ် စေနိုင်၏။ သစ်ပင်, တောင်, ခြောက်ကမ်းပါးမှ ကျရောက်သော်လည်း ဘေး မဖြစ်နိုင်။ မရသေးသော စည်းစိမ်ချမ်းသာ ရတနာဥစ္စာကိုလည်း ရစေနိုင်သည်။ ရရှိပြီးသော စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုလည်း ကြီးကျယ် ပြန့်ပွားစေနိုင်သည်။ ဟုတ်မှန် သောအားဖြင့် အမိုက်ပြောက်၍ အလင်းရောက်နိုင်သည်။
ချစ်သားအာနန္ဒာ စင်စစ်မူကား ဤဓာရဏပရိတ်တော်ကို ခုနှစ်ဆယ့်ခုနှစ်ကုဋေ ကုန်သော ဘုရားရှင်တို့သည် ကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်ပြီ။ ကောင်းသောအ ကျိုးနှင့်ယှဉ်၏၊ မကောင်းသောအကျိုးနှင့်မယှဉ်။ ကောင်းသောတရားအရသာ အနံ့မျိုးကို ဆောင်၏၊ မကောင်းသောတရားအရသာ အနံ့မျိုးကို မဆောင်။ ကောင်းသောစိတ်နှလုံးကိုဆောင်၏၊ မကောင်းသော စိတ်နှလုံးကိုမဆောင်။ သူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖေါ် ယှဉ်တွဲ မှီဝဲရသည်မည်၏၊ သူတော်မဟုတ် သူယုတ်တို့နှင့် မပေါင်းဖေါ်မယှဉ်တွဲ မမှီဝဲရသည် မည်၏။ ကောင်းသောကိုယ် ကိုဖြစ်စေ၏၊ မကောင်းသောကိုယ်ကို မဖြစ်စေရာ။ ကောင်းသောကုသိုလ်အမှုကို ပြုဆောင်ရ၏၊ မကောင်းသောအကုသိုလ်အမှုကို မပြုမဆောင်ရ။ ကောင်းသော အိပ်မက်ကို မြင်မက်ရ၏၊ မကောင်းသော အိပ်မက်ကိုမမြင်မက်ရ။ ကောင်းသော အတိတ်နမိတ်ကို မြင်ရ၏၊ မကောင်းသော အတိတ်နမိတ်ကို မမြင်ရ။
သစ်ပင်တို့ကိုလည်း အကိုင်း, အခက်, အရွက်, အလက်တို့နှင့် ပြည့်စုံစေနိုင်၏။ ဟုတ်မှန်သောအားဖြင့် အမိုက်ပြောက်၍ အလင်းရောက်နိုင်သည်။
ချစ်သားအာနန္ဒာ စင်စစ်မူကား ဤဓာရဏပရိတ်တော်ကို ကိုးဆယ့်ကိုးကုဋေကုန် သော ဘုရားရှင်တို့သည် ကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်ပြီ။ မကောင်းသဖြင့် ကြံစည်သူတို့၏ အကြံအစည်ကိုလည်း သိမြင်နိုင်၏။ ဓား, လှံ, လက်နက်, လေး, မြား, မီးပေါက်, အမြောက်အစရှိသော ဘေးတို့သည်လည်း မထိရောက်စေနိုင်။ မန္တန်, မန္တရား, ဂါထာ, အင်းအိုင်တို့သည်လည်း ထက်မြက်နိုင်၏ ရောဂါအန္တရာယ် တို့ကိုလည်း ပယ်ဖျောက်နိုင်၏။ ကြမ်းတမ်းခက်မာသော အနာရောဂါမျိုးတို့ မဖြစ်စေနိုင်။ ကြိုး, ထိတ်, သံခြေကျင်း, ကပ်ဘိ, တွင်းလှောင်, ပင်းသကား, လည်ထောက်ကိုလည်း လွတ်စေနိုင်၏။
ဤမှန်ကန်သော သစ္စာစကားကြောင့် အခါခပ်သိမ်း ငါ့အားချမ်းသာခြင်းသည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။
Posted by U Lawkanartha at 6/23/2008 02:20:00 PM Links to this post
Posted by U Lawkanartha at 6/23/2008 01:07:00 PM Links to this post
သင်တို့တွင်ရှိနေသော မကောင်းသောစိတ် ၁၂-မျိုး
၁။ ဝမ်းသာစိတ်နှင့်တကွ အယူမှား၍ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်၍ လုပ်သည်။
၂။ ဝမ်းသာစိတ်နှင့်တကွ အယူမှား၍ သူတပါးတိုက်တွန်း၍ လုပ်သည်။
၃။ ဝမ်းသာစိတ်နှင့်တကွ အယူမမှားဘဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်၍ လုပ်သည်။
၄။ ဝမ်းသာစိတ်နှင့်တကွ အယူမမှားဘဲ သူတပါးတိုက်တွန်း၍ လုပ်သည်။
၅။ ဝမ်းသာဝမ်းနဲမဟုတ် အယူမှား၍ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်၍ လုပ်သည်။
၆။ ဝမ်းသာဝမ်းနဲမဟုတ် အယူမှား၍ သူတပါးတိုက်တွန်း၍ လုပ်သည်။
၇။ ဝမ်းသာဝမ်းနဲမဟုတ် အယူမမှားဘဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်၍ လုပ်သည်။
၈။ ဝမ်းသာဝမ်းနဲမဟုတ် အယူမမှားဘဲ သူတပါးတိုက်တွန်း၍ လုပ်သည်။
၁။ စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်တကွ ဒေါသနှင့်ယှဉ်၍ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်၍ လုပ်သည်။
၂။ စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်တကွ ဒေါသနှင့်ယှဉ်၍ သူတပါးတိုက်တွန်း၍ လုပ်သည်။
၁။ ဝမ်းသာဝမ်းနဲမဟုတ် ယုံမှားသံသယစိတ်နှင့် လုပ်သည်။
၂။ ဝမ်းသာဝမ်းနဲမဟုတ် ပျံ့လွင့်စိတ်နှင့် လုပ်သည်။
လောဘမူစိတ် ၈-ပါး ဆိုရိုး
၁။ သောမနဿသဟဂုတ် ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
၂။ သောမနဿသဟဂုတ် ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
၃။ သောမနဿသဟဂုတ် ဒိဋ္ဌိဂတဝိပ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
၄။ သောမနဿသဟဂုတ် ဒိဋ္ဌိဂတဝိပ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
၅။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
၆။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
၇။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် ဒိဋ္ဌိဂတဝိပ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
၈။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် ဒိဋ္ဌိဂတဝိပ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
ဒေါသမူစိတ် ၂-ပါး ဆိုရိုး
၉။ ဒေါမနဿသဟဂုတ် ပဋိဃသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
၁ဝ။ ဒေါမနဿသဟဂုတ် ပဋိဃသမ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်တစ်ပါး။
မောဟမူစိတ် ၂-ပါး ဆိုရိုး
၁၁။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် ဝိစိကိစ္ဆာသမ္ပယုတ်စိတ်တစ်ပါး။
၁၂။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် ဥဒ္ဓစ္စသမ္ပယုတ်စိတ်တစ်ပါး
Posted by U Lawkanartha at 6/23/2008 11:17:00 AM Links to this post
၁။ မောဟ၊ မသိတတ်ခြင်း။ ၂။ အဟိရိက၊ အကုသိုလ်ပြုရန် မရှက်ခြင်း။ ၃။ အနောတ္တပ္ပ၊ အကုသိုလ်ပြုရန် မကြောက်လန့်ခြင်း။ ၄။ ဥဒ္ဓစ္စ၊ စိတ်ပျံ့လွင့်ခြင်း။ ၅။ လောဘ၊ လိုချင်မှုသဘော။ ၆။ ဒိဋ္ဌိ၊ မှားမှားယွင်းယွင်း သိမြင်ခြင်း။ ၇။ မာန၊ ထောင်လွှားတက်ကြွခြင်းသဘော။ ၈။ ဒေါသ၊ စိတ်၏ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းသဘော။ ၉။ ဣဿာ၊ ငြူစူ မနာလိုခြင်းသဘော။ ၁၀။ မစ္ဆရိယ၊ ၀န်တိုခြင်းသဘော။ ၁၁။ ကုက္ကုစ္စ၊ နောင်တတစ်ဖန် ပူပန်ခြင်းသဘော။ ၁၂။ ထိန၊ ထိုင်းခြင်း။ ၁၃။ မိဒ္ဓ၊ မှိုင်းခြင်း။ ၁၄။ ၀ိစိကိစ္ဆာ၊ ယုံမှားခြင်း။ မယုံတ၀က် ယုံတ၀က်။
Posted by U Lawkanartha at 6/18/2008 06:55:00 PM Links to this post
'ဘေး' ဟူသော အမည်သည် ကာမဂုဏ်တို့၏ အမည်တည်း၊
'ဒုက္ခ' ဟူသော အမည်သည် ကာမဂုဏ်တို့၏ အမည်တည်း၊
'ရောဂါ' ဟူသော အမည်သည် ကာမဂုဏ်တို့၏ အမည်တည်း၊
'အိုင်းအမာ' ဟူသော အမည်သည် ကာမဂုဏ်တို့၏ အမည်တည်း၊
'ကပ်ငြိခြင်း' ဟူသော အမည်သည် ကာမဂုဏ်တို့၏ အမည်တည်း၊
'ညွန်ပျောင်း' ဟူသော အမည်သည် ကာမဂုဏ်တို့၏ အမည်တည်း။
အဘယ်ကြောင့် ဘေး, ဒုက္ခ, ရောဂါ, အိုင်းအမာ, ကပ်ငြိခြင်း, ညွန်ပျောင်း
ဟူသော ဤအမည်တို့သည် ကာမဂုဏ်တို့၏ အမည်ဖြစ်ကြသနည်းဆိုသော်...
ရဟန်းတို့ ကာမဂုဏ် ၅-ပါးတို့၌
ကာမ ရာဂဖြင့် တပ်မက်၍ ဆန္ဒရာဂဖြင့် နှောင်ဖွဲ့အပ်သော ဤသတ္တဝါသည် မျက်မှောက် ဆင်းရဲမှလည်း မလွတ်၊
တမလွန် ဆင်းရဲမှလည်း မလွတ်၊
ထို့ကြောင့် ဤအမည်တို့သည် ကာမဂုဏ်တို့၏ အမည်ဖြစ်၏။
ယင်းကာမတို့၌ ပုထုဇဉ် သတ္တဝါသည် ကပ်ငြိ၏။
(ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်) ပဋိသန္ဓေနေခြင်း သေခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော ဥပါဒါန်တရား၌ ဘေးကို မြင်သဖြင့် (တဏှာ ဒိဋ္ဌိအားဖြင့်)မစွဲလမ်းမူ၍ ပဋိသန္ဓေ နေခြင်း သေခြင်း၏ ကုန်ရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်၌ ကိလေသာတို့မှ လွတ်ကုန်၏။
ထိုရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဘေးကင်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကုန်သည် ဖြစ်၍ ချမ်းသာခြင်း ရှိကုန်သည်၊ မျက်မှောက်ဘဝ၌ ငြိမ်းအေးကုန်သည်၊ ရန်ဘေးအားလုံးကို လွန်ကုန်သည် ဖြစ်၍ ဆင်းရဲဒုက္ခ ဟူသမျှကို လွန်မြောက်ကုန်၏။
ဘယသုတ်၊ အနုတ္တရိယ၀ဂ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 6/18/2008 01:57:00 PM Links to this post
ကြီးပွါးချမ်းသာစေသော အကြောင်း ၆-ပါး-
အဖန်ဖန် အောက်မေ့ခြင်း 'အနုဿတိ'တို့သည် ဤခြောက်မျိုးတို့တည်း။
အနုဿတိဋ္ဌာနသုတ်၊ အာဟုနေယျဝဂ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်။
Posted by U Lawkanartha at 6/18/2008 01:41:00 PM Links to this post
ပါဠိ အသံထွက်ပုံ ဖတ်ထုံးလင်္ကာ-
ပါဠိ အသံထွက်ပုံ ဖတ်ထုံးလင်္ကာ
၁။ က ဂ ဆင့် ဖတ်ထုံးလင်္ကာ။
အ နှင့် သြ နောက်၊ က ဂ ရောက်၊ မဖေါက် က သတ်ပါ။
ဣ ဥ နောက်ပါး၊ က ဂ များ၊ မမှား တ သတ်ပါ။
၂။ စ ဇ ဆင့် ဖတ်ထုံးလင်္ကာ။
အ ရဲ့နောက်တွင်၊ စ ဇ မြင်၊ စ ပင်သတ်လေပါ။
ဣ နှင့် ဥ နောက်၊ စ ဇ ရောက်၊ မဖောက် တ သတ်ရာ။
သြ ရဲ့နောက်ပါး၊ စ ဇ များ၊ မှတ်သား အွတ် သံသာ။
၃။ ဋ ဍ တ ဒ ပ ဗ ဆင့် ဖတ်ထုံးလင်္ကာ။
ဋ ဍ တ ဒ၊ ပ နှင့် ဗ၊ ဣ အ ဥ နောက် တ သတ်ရာ။
ဧ နောက် စသတ်၊ သြ နောက်မှတ်၊ ဖတ်လေ အွတ် သံသာ။
၄။ င ဉ ဆင့် ဖတ်ထုံးလင်္ကာ။
အ ရဲ့နောက်တွင်၊ င ဉ မြင်၊ ဖတ်လျှင် င သတ်ပါ။
ဣ ဥ ဆုံးနောက်၊ င ဉ ရောက်၊ မဖောက် န သတ်ရာ။
၅။ ဏ န မ လ ဟ ဆင့် ဖတ်ထုံးလင်္ကာ။
ဏ န မ လ ဟ မှတ်ကြ၊ ဣ ဥ အ နောက် နသတ်ရာ။
ဧ နောက် င သတ်၊ သြ နောက်မှတ်၊ ဖတ်လေ အွန် သံသာ။
၆။ ယ ဆင့် ဖတ်ထုံးလင်္ကာ။
ဣ ဥ နောက် ယ၊ န သတ်ပြ၊ သတ်မရ ဧ နောက်မှာ။
အ နောက် ယ ကပ်၊ အယ် သံဖတ်၊ မှတ်အပ်လွန်သေချာ။
၇။ သ ဆင့် ဖတ်ထုံးလင်္ကာ။
ဣ ဥ အ နောက်၊ သ ဆင့်ရောက်၊ မဖောက် တ သတ်ပါ။
ဧ နောက် သ ကို၊ စ သတ်ဆို၊ ဖတ်လိုမြဲမကွာ။
Posted by U Lawkanartha at 6/17/2008 02:08:00 PM Links to this post
၁။ နှစ်လုံးဆင့်တွင်၊ အထက်လျှင်၊ သတ်ပင် မြဲဧကန်။ (ကတ္ထ= ကတ်ထ)
၂။ သဝေလည်းထိုး၊ တ-သတ်မျိုး၊ ဖတ်ရိုး စ-သတ်သံ။ (မေတ္တ= မစ်တ)
၃။ သဝေလည်းထိုး၊ န-သတ်မျိုး၊ ဖတ်ရိုး င-သတ်သံ။ (ပူရေန္တံ= ပူရင်တံ)
၄။ သဝေ ရေးချ၊ သတ်မြင်က၊ ဖတ်ကြ ဝဆွဲသံ။ (ဟောန္တု= ဟွန်တု)
၅။ ဿ-ကိုမြင်လတ်၊ သ-နှစ်လုံးမှတ်၊ ဖတ်ကြ တ-သတ်သံ။ (တဿ= တတ်သ)
၁။ နှစ်လုံးဆင့်ခေါ်သော ပါဌ်ဆင့်စာလုံးတို့ကိုတွေ့လျှင် အထက်ကစာလုံး၌ အသတ်ထည့်ဖတ်ပါ။
ကတ္ထ-၌ တဝမ်းပူကို အသတ်ထည့်၍ ကတ်ထ-ဟုဖတ်ပါ။
ကန္တ-၌ နငယ်ကို အသတ်ထည့်၍ ကန်တ-ဟုဖတ်ပါ။
ပါဌ်ဆင့်တိုင်း၌ အပေါ်စာလုံးကို အသတ်ထည့်၍ဖတ်ပါ။ မူသေစည်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ သဝေထိုးလည်းပါ တ-သတ်လည်းပါသော စာလုံးမျိုးတွင်
အသံထွက်သော အခါ စ-သတ်အသံဖြင့်ဖတ်ပါ။
ခေတ္တ-၌ သဝေထိုးနှင့် တ-သတ်ပါနေသဖြင့် ခစ်တ-ဟု အသံထွက်ဖတ်ပါ။
၃။ သဝေထိုးလည်းပါ န-သတ်လည်းပါလျှင် င-သတ်သံဖြင့် အသံထွက်ပါ။
ပူရေန္တံ-၌ သဝေထိုးလည်းပါ န-သတ်လည်းပါသဖြင့် ပူရင်တံ-ဟု င-သတ်သံ ဖြင့်ဖတ်ပါ။
၄။ သဝေထိုးလည်းပါ ရေးချလည်းပါ အသတ်တစ်ခုခုလည်းပါနေပါက ဝဆွဲသံဖြင့် ဖတ်ပါ။
သောတ္ထိ-၌ သဝေထိုး ရေးချ တ-သတ်ပါနေသဖြင့် သွတ်ထိ-ဟု ဝဆွဲသံဖြင့်ဖတ်ပါ။
ဟောန္တု-၌လည်း ဟွန်တု-ဟု ဝဆွဲသံဖြင့်ဖတ်ပါ။
၅။ ဿ(သ-ကြီး) သည် သနှစ်လုံး တွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။
နမော တဿ-ကိုဖတ်လျှင် နမော တတ်သ-ဟု ဖတ်ရမည်။
(အ ဣ ဥ) (က ကိ ကု) (ခ ခိ ခု) (ဂ ဂိ ဂု) အသံတိုနှင့်ဖတ်ပါလေ။
(အာ ဤ ဦ ဧ သြ) (ကာ ကီ ကူ ကေ ကော) (ခါ ခီ ခူ ခေ ခေါ) အသံရှည်နှင့်ဖတ်ပါလေ။
Posted by U Lawkanartha at 6/17/2008 02:01:00 PM Links to this post
ပါဠိပါဌ်ဆင့် ရေးနည်းဖတ်နည်း အနည်းငယ်
ပါဠိပါဌ်ဆင့် ရေးနည်းဖတ်နည်း ကျွမ်းကျင်စေရန် ရှေးဦးစွာ
ပါဠိဘာသာ အက္ခရာ ၄၁-လုံးနှင့် သရ, ဗျည်း ခွဲခြားခြင်း၊
သရကို သံတို သံရှည်ခွဲခြားခြင်း၊
ဗျည်းကိုလည်း ဌာန်တူရာ စုပေါင်း၍ အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းများကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သရ ၈-လုံးနှင့် ဗျည်း ၃၃-လုံးပေါင်းလျှင် အက္ခရာ ၄၁-လုံးဖြစ်သည်။
သရ ၈-လုံး= အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ သြ။
က ၊ ခ ၊ ဂ ၊ ဃ ၊ င ၊ စ ၊ ဆ ၊ ဇ ၊ ဈ ၊ ည ၊ ဋ ၊ ဌ ၊ ဍ ၊ ဎ ၊ ဏ ၊ တ ၊ ထ ၊ ဒ ၊ ဓ ၊ န ၊ ပ ၊ ဖ ၊ ဗ ၊ ဘ ၊ မ ၊ ယ ၊ ရ ၊ လ ၊ ဝ ၊ သ ၊ ဟ ၊ ဠ ၊ အ။
Posted by U Lawkanartha at 6/17/2008 11:12:00 AM Links to this post
၁။ သမန္တာ စက္ကဝါဠေသု၊ အတြာဂစ္ဆန္တု ဒေဝတာ။
သဒ္ဓမ္မံ မုနိရာဇဿ၊ သုဏန္တု သဂ္ဂမောက္ခဒံ။
၁။ လူတို့နေထိုင်လျက်ရှိသော ဤစကြဝဠာနှင့်အတူ တွဲဖက်တည်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင် စကြဝဠာတစ်သောင်းမှ သောင်းလောကဓာတ် နတ်မြတ်အပေါင်း တို့ ရဟန်းတို့၏မင်း ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ နတ်ရွာနိဗ္ဗာန် ချမ်းသာ မှန်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော သူတော်ကောင်းတရားကို နားကြားအံ့သောငှာ ဤ နေရာဤဒေသသို့ လာရောက်ကြပါကုန်လော့၊ လာရောက်၍ ရိုသေစွာ နာယူ ကြပါကုန်လော့။
၂။ ဓမ္မဿဝနကာလော အယံ ဘဒ္ဒန္တာ။
၂။ အို သောင်းလောကဓာတ် နတ်မြတ်အပေါင်းတို့ ယခုအခါသည်ကား မြတ်စွာ ဘုရား၏ တရားတော်ကို နာကြားရမည့် မင်္ဂလာအခါတော် ဖြစ်လေသည်။
၃။ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပစ္စည်းလေးပါးအလှူကို ခံယူတော်မူထိုက်သော, လူသူ လေးပါး မသိမမြင်နိုင်သည့် ဆိတ်ကွယ်ရာနေရာ၌ ဖြစ်စေကာမူ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်ကို ပြုလုပ်ခြင်း အလျင်းမရှိသော, ဘဝသံသရာဘီး၏ အကန့် အထောက်သဖွယ် ဖြစ်စေတတ်သော အလုပ်ဟူသမျှကို ပြုလုပ်ခြင်းမရှိသော, ကိလေသာတို့ကို အပြီး သတ်ဖယ်ရှင်းပြီး မိမိအလိုလို ကိုယ်တော်တိုင် သစ္စာလေးရပ်တရားမြတ်ကို ထိုးထွင်း သိမြင်တော်မူပြီးသော ဘုန်းတော် အနန္တ ၏အရှင် ဘုရားသခင်အား ဦးညွတ်ရှိခိုး ကြပါကုန်၏။
၄။ ယေ သန္တာ သန္တစိတ္တာ, တိသရဏသရဏာ, ဧတ္ထလောကန္တရေ ဝါ၊ ဘုမ္မာ ဘုမ္မာ စ ဒေဝါ, ဂုဏ ဂဏ ဂဟဏ, ဗျာဝဋာ သဗ္ဗကာလံ။ ဧတေ အာယန္တု ဒေဝါ, ဝရ ကနကမယေ, မေရုရာဇေ ဝသန္တော၊ သန္တော သန္တောသဟေတုံ, မုနိဝရဝစနံ, သောတု မဂ္ဂံ သမဂ္ဂါ။
၄။ ဤစကြဝဠာ၌ လည်းကောင်း၊ ပြင်ပစကြဝဠာများ၌ လည်းကောင်း၊ နေထိုင်လျက်ရှိကြကုန်သော ကိုယ်ဣနြေ္ဒလည်းငြိမ်သက်၊ စိတ်ဓာတ်လည်း ငြိမ်သက်လျက် ရှိကြကုန်သော ရတနာသုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ပြီး လောကီကျေးဇူး လောကုတ္တရာ ကျေးဇူးတို့ကို ရရှိနိုင်ရန် အမြဲတမ်းလုံ့လ စိုက်လျက်ရှိသော ဘုမ္မစိုးနတ် (မြေမှီနတ်)၊ အာကာသစိုးနတ် (ကောင်းကင် နေသောနတ်) အပေါင်းနှင့်တကွ မြတ်သော ရွှေစိုင်အတိပြီးသော မြင်းမိုရ် တောင်မင်း၌ မှီတင်းနေထိုင်ကြသော နတ်သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့သည် သောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေးအတွက် ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော ဘုရားစကားတော်မြတ်ကို နာယူပန်ဆင်ရန်အလို့ငှာ တညီ တညွတ်တည်း စုဝေး ရောက်လာကြပါကုန်လော့။
၅။ သဗ္ဗေသု စက္ကဝါဠေသု၊
ယက္ခာ ဒေဝါ စ ဗြဟ္မနော။
၆။ သဗ္ဗေ တံ အနုမောဒိတွာ၊
သမဂ္ဂါ သာသနေ ရတာ။
၅-၆။ စကြဝဠာဟူသမျှ၌ ဘီလူးများ၊ နတ်များနှင့် ဗြဟ္မာများ ရှိကြကုန်သည်ပင် ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စည်းစိမ်ချမ်းသာဟူသမျှကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည့် ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အသင် ဘီလူး နတ် ဗြဟ္မာတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ဝမ်းမြောက်ကြည်နူး ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းထားကာ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာတော်၌ မွေ့လျော် နှစ်ခြိုက်ကြပါ။ စောင့်ရှောက်ထိုက်သူ များအား စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုရသည့် သင်တို့၏ လုပ်ငန်းတို့ကို မမေ့မလျော့ အထူး ဆောင်ရွက်တော်မူကြပါ။
၇။ သာသနဿ စ လောကဿ၊ ဝု ဍ္ဎီ ဘဝတု သဗ္ဗဒါ။
သာသနမ္ပိ စ လောကဉ္စ၊ ဒေဝါ ရက္ခန္တု သဗ္ဗဒါ။
၇။ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာတော် မြတ်ကြီးသည် လည်းကောင်း၊ လူတို့၏ ကမ္ဘာလောကကြီးသည် လည်းကောင်း ထာဝရ တိုးတက်ကြီးမြင့်ပါစေ၊ သာသနာတော်နှင့် လူ့လောကကို နတ်အပေါင်းတို့က အမြဲမပြတ် ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ကြပါစေ။
၈။ သဒ္ဓိံ ဟောန္တု သုခီ သဗ္ဗေ၊ ပရိဝါရေဟိ အတ္တနော။
အနီဃာ သုမနာ ဟောန္တု၊ သဟသဗ္ဗေဟိ ဉာတိဘိ။
၈။ မည်သူမဆို သူ၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အတူတကွ ချမ်းသာပါစေ၊ ဝမ်းမြောက် ရွှင်ပြုံး နှလုံးချမ်းမြေ့ ကြပါစေ။
၉။ ရာဇတော ဝါ စောရတော ဝါ
မနုဿတော ဝါ အမနုဿတော ဝါ
အဂ္ဂိတော ဝါ ဥဒကတော ဝါ
ပိသာစတော ဝါ ခါဏုကတော ဝါ
ကဏ္ဋကတော ဝါ နက္ခတ္တတော ဝါ
ဇနပဒရောဂတော ဝါ အသဒ္ဓမ္မတော ဝါ
အသန္ဒိဋ္ဌိတော ဝါ အသပ္ပုရိသတော ဝါ
စဏ္ဍ ဟတ္ထိ အဿ မိဂ ဂေါဏ ကုက္ကုရ
အဟိဝိစ္ဆိက မဏိသပ္ပ ဒီပိ
အစ္ဆ တရစ္ဆ သူကရ မဟိံသ ယက္ခ ရက္ခသာဒီဟိ
နာနာဘယတော ဝါ နာနာရောဂတော ဝါ
နာနာဥပဒ္ဒဝတော ဝါ အာရက္ခံ ဂဏှန္တု
၉။ မင်းဘေး၊ ခိုးသူဘေး၊ လူဘေး၊ ဘီလူးဘေး၊ မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ မြေဘုတ် ဘီလူးဘေး၊ သစ်ငုတ်ဘေး၊ ဆူးငြောင့်ဘေး၊ မကောင်းသောနက္ခတ်ဘေး၊ ဇနပုဒ် ရောဂါဘေး၊ မမှန်ကန်သောတရားဘေး၊ မှားသောအယူဝါဒဘေး၊ လူယုတ်မာ တို့၏ဘေး၊ ဤသို့သော ဘေးဆိုး အန္တရာယ်ဆိုးတို့မှ လည်းကောင်း၊ ဆင်ဆိုး၊ မြင်းဆိုး၊ သားကောင်ဆိုး၊ နွားဆိုး၊ ခွေးဆိုး၊ မြွေဆိုး၊ ကင်းဆိုး၊ မြွေစိမ်းဆိုး၊ သစ်ဆိုး၊ ဝံဆိုး၊ အောင်းဆိုး၊ ဝက်ဆိုး၊ ကျွဲဆိုး၊ ဘီလူးဆိုး၊ ရေစောင့်ဘီလူးဆိုး စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် ဘေးအမျိုးမျိုး၊ ရောဂါအမျိုးမျိုး၊ ဥပဒ်အမျိုးမျိုး တို့မှ လည်းကောင်း (လူတို့ကင်းဝေးအောင် မမြင်ရအောင် နတ်အပေါင်းတို့က) အစောင့်အရှောက် တာဝန်ယူကြပါကုန်။
ပရိတ်ကြီးနိဒါန်း မြန်မာပြန် ပြီး၏။
ပရိတ်ကြီး ၁၁-သုတ် ပါဠိတော် မြန်မာပြန်၊ ပရိတ်
Posted by U Lawkanartha at 6/16/2008 04:42:00 PM Links to this post
Labels: ပရိတ်ကြီး ၁၁-သုတ် ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
မင်္ဂလသုတ်တော် မြန်မာပြန် ပြီး၏။
Posted by U Lawkanartha at 6/16/2008 04:37:00 PM Links to this post
ကပ်ကြီးသုံးပါးကို ကျော်နင်းစေနိုင်သည်၊ စုန်း, တစ္ဆေ, ကဝေ ပယောဂဟူသမျှ ကို နိုင်သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရသောအခါ အချုပ်ထောင် နှောင်အိမ်စသည်တို့၌ ကျရောက်နေသောအခါ အမြန်လွတ် မြောက်စေနိုင်သည်။ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့၏ စောင်မကြည့်ရှုခြင်းကို ခံရ မည်ဖြစ်ပေသည်။
၁။ ပဏိဓာနတော ပဋ္ဌာယ တထာဂတဿ ဒသ ပါရမိယော, ဒသ ဥပပါရမိ- ယော, ဒသ ပရမတ္ထပါရမိ ယောတိ သမတ္တိံသပါရမိယော ,ပဉ္စ မဟာပရိစ္စာဂေ, လောကတ္ထစရိယံ ဉာတတ္ထစရိယံ ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယန္တိ တိေဿာ စရိယာယော, ပစ္ဆိမဘဝေ ဂဗ္ဘဝေါက္ကန္တိံ, ဇာတိံ, အဘိနိက္ခမနံ, ပဓာနစရိယံ, ဗောဓိပလ္လင်္ကေ မာရဝိဇယံ, သဗ္ဗညုတညာဏပ္ပဋိဝေဓံ, ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနံ, နဝ လောကုတ္တရဓမ္မေ- တိ သဗ္ဗေပိ, မေ ဗုဒ္ဓဂုဏေ အာဝဇ္ဇေတွာ ဝေသာလိယာ တီသု ပါကာရန္တရေသု တိယာမရတ္တိံ ပရိတ္တံ ကရောန္တော အာယသ္မာ အာနန္ဒတ္ထေရော ဝိယ ကာရုညစိတ္တံ ဥပဋ္ဌပေတွာ-
၁။ ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရား ခြေတော်ရင်း၌ နိယတဗျာဒိတ်ကို ခံယူတော် မူသည်မှစ၍ ဥစ္စာ, သား, မယား တိုင်းကားပြည်ရွာစသည်တို့ကို ပယ်ခွာစွန့်လှူ ဖြည့်ကျင့်တော်မူလျက် ရှေးဘုရားတို့နှင့် အလားတူစွာ ကြွလာတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ ဆယ်ပါးသောပါရမီတော်။
မျက်စိ, နား, နှာ, ခြေ, လက် စသော ကိုယ်အင်္ဂါတို့ကို ပယ်ခွာစွန့်လှူ ဖြည့်ကျင့် တော်မူသော ဆယ်ပါးသော ဥပပါရမီတော်။
ကိုယ်အသက်ကို မငဲ့ကွက် မညှာတာ ပယ်ခွာစွန့်လှူ ဖြည့်ကျင့်တော်မူသော ဆယ်ပါးသော ပရမတ္ထပါရမီတော်၊ ဤအမျှ သုံးဆယ်သော ပါရမီတော်တို့ကို လည်းကောင်း။
ဥစ္စာ, သား, မယား, ကိုယ်အင်္ဂါ, အသက်အားဖြင့် ငါးပါးသော စွန့်ခြင်းကြီးတို့ကို လည်းကောင်း။
အလုံးစုံသော သတ္တလောကကြီး၏ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ ကျင့်တော်မူခြင်း၊ အမျိုးသားတို့၏ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ ကျင့်တော်မူခြင်း၊ ဘုရားဖြစ်ခြင်း အလို့ငှာ ကျင့်တော်မူခြင်း၊ ဤသုံးပါးသော အကျင့်မြတ်တို့က်ို လည်းကောင်း။
အဆုံးစွန်သော ကိုယ်တော်၏ အဖြစ်၌ အမိဝမ်းတွင်းဝယ် ပဋိသန္ဓေနေတော် မူခြင်း၊ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း၊ တောထွက်တော်မူခြင်း၊ ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်တော်မူ ခြင်း၊ ဗောဓိပလ္လင်၌ မာရ်ငါးပါးကို အောင်တော်မူခြင်း၊ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရတော်မူခြင်း၊ ဓမ္မစကြာတရားတော်ကို ဟောတော်မူခြင်းတို့ကို လည်းကောင်း။
မဂ်လေးပါး ဖိုလ်လေးပါး နိဗ္ဗာန်အားဖြင့် လောကုတ္တရာ တရားကိုးပါးတို့ကို လည်းကောင်း။
ဤအလုံးစုံသော ဘုရားဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တို့ကို အောက်မေ့ဆင်ခြင်ပြီးလျှင် ဝေသာလီပြည် မြို့ရိုးသုံးထပ်တို့၏ အကြား၌ ညဉ့်သုံးယံပတ်လုံး ပရိတ်အရံ အတားကို ပြုတော်မူသော အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်ကဲ့သို့ သနားခြင်း ကရုဏာ ရှိသောစိတ်ကို ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ထားကြကုန်လျက်-
၂။ ကောဋီသတသဟေဿသု၊ စက္ကဝါဠေသု ဒေဝတာ။
ယဿာ'ဏံ ပဋိဂ္ဂဏှန္တိ၊ ယဉ္စ ဝေသာလိယာ ပုရေ။
၃။ ရောဂါမနုဿဒုဗ္ဘိက္ခ၊ သမ္ဘူတံ တိဝိဓံ ဘယံ။
ခိပ္ပ'မန္တရဓာပေသိ၊ ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
၂-၃။ စကြဝဠာ ကုဋေတစ်သိန်း၌ နေထိုင်ကြကုန်သော နတ်အများတို့သည် ရတနသုတ် ပရိတ်တရားတော်၏ တန်ခိုးအာဏာစက်ကို နှစ်သက်ကြည်ဖြူ ခံယူကြလေကုန်၏။ ဤရတနသုတ် ပရိတ်တော်သည်သာလျင် ဝေသာလီပြည်၌ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေး အနာရောဂါဘေး ဘီလူးဘေး ဤဘေးကြီးသုံးပါး တို့ကို လျင်မြန်စွာ ကွယ်ပျောက် ငြိမ်းအေးစေတော်မူ၏။
အို- သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့ ထိုရတနသုတ် ပရိတ်တော်ကို ငါတို့ရွတ်ဖတ် ကြကုန်စို့။
၄။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမ္မာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အန္တလိက္ခေ။
သဗ္ဗေဝ ဘူတာ သုမနာ ဘဝန္တု၊ အထောပိ သက္ကစ္စ သုဏန္တု ဘာသိတံ။
၄။ မြေ၌တည်ကုန်သော နတ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်၌တည်ကုန် သော နတ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ဤအရပ်သို့ အညီအညွတ် လာကြကုန်၏၊ အလုံးစုံသာလျှင်ဖြစ်သော နတ်တို့သည် နှစ်သက်ရွှင်ပြ ဝမ်းမြောက်ကြစေကုန် သတည်း၊ ထိုမှတစ်ပါးလည်း (ငါဘုရား)ဟောအပ်သော ပရိတ်တရားတော်ကို ရိုသေစွာနာကြစေကုန် သတည်း။
၅။ တသ္မာ ဟိ ဘူတာ နိသာမေထ သဗ္ဗေ၊
မေတ္တံ ကရောထ မာနုသိယာ ပဇာယ။
ဒိဝါ စ ရတ္တော စ ဟရန္တိ ယေ ဗလိံ၊
၅။ နတ်များတို့ ထို့ကြောင့်သာလျှင် အသင်နတ်အားလုံးတို့သည် (ဟောတော်မူ အပ်သော ပရိတ်တရားတော်ကို စိတ်၌)သိုမှီးသိမ်းဆည်းကြကုန်လော့၊ လူ သတ္တဝါအပေါင်း၌ မေတ္တာကိုပြုကြကုန်လော့၊ အကြင်သူတို့သည် နေ့၌ လည်း ကောင်း၊ ညဉ့်၌လည်းကောင်း သင်တို့အား ပူဇော်ပသခြင်းကို ပြုကြကုန်၏၊ ထို့ကြောင့်သာလျှင် ထိုလူတို့ကို မမေ့မလျှော့ စောင့်ရှောက်ကြကုန်လော့။
၆။ ယံကိဉ္စိ ဝိတ္တံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သဂ္ဂေသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
နနော သမံ အတ္ထိ တထာဂတေန၊ ဣဒမ္ပိ ဗုဒ္ဓေ ရတနံ ပဏီတံ။
၆။ ဤလူ့ပြည်၌လည်းကောင်း၊ နဂါး, ဂဠုန်ပြည်တို့၌ လည်းကောင်း၊ နတ်ပြည် တို့၌လည်းကောင်း နှစ်သက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်သော မွန်မြတ်သော အလုံးစုံ သော အကြင် ရတနာမျိုးသည်ရှိ၏၊ ထိုရတနာမျိုးတွင် မြတ်စွာဘုရားနှင့်တူသော ရတနာမျိုးသည်မရှိ၊ ဘုရားဟူသော ဤရတနာသည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
၇။ ခယံ ဝိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ၊ ယဒဇ္ဈဂါ သကျမုနီ သမာဟိတော။
န တေန ဓမ္မေန သမတ္ထိ ကိဉ္စိ၊ ဣဒမ္ပိ ဓမ္မေ ရတနံ ပဏီတံ။
၇။ ကိလေသာကုန်ရာဖြစ်သော ရာဂ၏ကင်းရာဖြစ်သော သေခြင်းကင်းသော မြတ်သောအကြင်နိဗ္ဗာန်ကို တည်ကြည်သောစိတ်ရှိသော သာကီနွယ်ဖွား မြတ်ဘုရားသည် ရတော်မူ၏၊ ထို(နိဗ္ဗာန်) တရားနှင့်တူသော တစ်စုံ တစ်ခုသော ရတနာမျိုးသည်မရှိ၊ နိဗ္ဗာန်တရားဟူသော ဤရတနာသည်လည်း အမြတ်ဆုံး ဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
၈။ ယံ ဗုဒ္ဓသေဋ္ဌော ပရိဝဏ္ဏယီ သုစိံ၊ သမာဓိ' မာနန္တရိက'ည' မာဟု။
သမာဓိနာ တေန သမော န ဝိဇ္ဇတိ၊ ဣဒမ္ပိ ဓမ္မေ ရတနံ ပဏီတံ။
၈။ မြတ်စွာဘုရားသည် အကြင်(အရဟတ္တမဂ်နှင့်ယှဉ်သော)သမာဓိကို စင်ကြယ် ၏ဟု ချီးမွမ်းတော်မူ၏၊ အကြင် (အရဟတ္တမဂ်နှင့်ယှဉ်သော) သမာဓိကို မိမိ အခြားမဲ့၌ အကျိုးပေး၏ဟု (ဘုရားရှင်တို့) ဟောဆိုကုန်၏၊ (အရဟတ္တမဂ်နှင့် ယှဉ်သော) သမာဓိနှင့်တူသော တရားမျိုးသည်မရှိ တရားတော်ဟူသော ဤ ရတနာသည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေသတည်း။
၉။ ယေ ပုဂ္ဂလာ အဋ္ဌသတံ ပသတ္ထာ၊ စတ္တာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ဟောန္တိ။
တေ ဒက္ခိဏေယျာ သုဂတဿ သာဝကာ၊ ဧတေသု ဒိန္နာနိ မဟပ္ဖလာနိ။
ဣဒမ္ပိ သံဃေ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧတေန သစ္စေန သုဝတ္ထိ ဟောတု။
၉။ လေးယောက်အစုံဖြစ်ကုန်သော ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ယောက်တို့ကို သူတော်ကောင်း တို့သည် ချီးမွမ်းအပ်ကုန်ပြီ၊ မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်ဖြစ်ကုန်သော ထိုပုဂ္ဂိုလ် တို့သည် မြတ်သောအလှူကို ခံထိုက်ကုန်၏၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ လှူအပ်သော အလှူတို့သည် အကျိုးကြီးကုန်၏၊ သံဃာဟူသော ဤရတနာသည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့)ချမ်းသာပါစေသတည်း။
၁ဝ။ ယေ သုပ္ပယုတ္တာ မနသာ ဒဠှေန၊ နိက္ကာမိနော ဂေါတမသာသနမှိ။
တေ ပတ္တိပတ္တာ အမတံ ဝိဂယှ၊ လဒ္ဓါ မုဓာ နိဗ္ဗုတိံ ဘုဉ္ဇမာနာ။
၁ဝ။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာ၌ အကြင်(ရဟန္တာ)ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ခိုင်မြဲ စွာသောစိတ်ဖြင့် ကောင်းစွာအားထုတ်ကြကုန်၏၊ (ကိလေသာမှ)ထွက်မြောက် ကြကုန်၏၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရထိုက်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရကြကုန်သည်ဖြစ် ၍ သေခြင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုသောအားဖြင့် ရကုန်လျက် မပျက်မစီး အရဟတ္တ ဖလသမာပတ်ကို ခံစားကုန်၏၊ သံဃာဟူသော ဤရတနာသည် လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
၁၁။ ယထိန္ဒခီလော ပထဝိဿိတော သိယာ၊ စတုဗ္ဘိ ဝါတေဟိ အသမ္ပကမ္ပိယော။
တထူပမံ သပ္ပုရိသံ ဝဒါမိ၊ ယော အရိယသစ္စာနိ အဝေစ္စ ပဿတိ။
၁၁။ မြေ၌စိုက်ထူအပ်သော တံခါးတိုင်သည် အရပ်လေးမျက်နှာတို့မှ လာသော လေတို့ကြောင့် မတုန်လှုပ်သကဲ့သို့ အရိယာသစ္စာတို့ကို ပညာဖြင့်သက်ဝင်၍မြင် သော သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ထိုတံခါးတိုင်နှင့်တူ၏ဟု ငါဆို၏၊ သံဃာဟူသော ဤရတနာသည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
၁၂။ ယေ အရိယသစ္စာနိ ဝိဘာဝယန္တိ၊ ဂမ္ဘီရပညေန သုဒေသိတာနိ။
ကိဉ္စာပိ တေ ဟောန္တိ ဘုသံ ပမတ္တာ၊ န တေ ဘဝံ အဋ္ဌမ'မာဒိယန္တိ။
၁၂။ အကြင် (သောတာပန်) ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် နက်နဲသော ဉာဏ်ပညာရှိသော မြတ်စွာဘုရား ကောင်းစွာ ဟောကြားအပ်သော အရိယသစ္စာတို့ကို ထင်ရှား အောင်ပြုကုန်၏၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ပြင်းထန်စွာ မေ့လျော့ကြစေကာမူ ရှစ်ကြိမ် မြောက်ဘဝကို မယူကုန်၊ သံဃာဟူသော ဤရတနာသည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ် ၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
၁၃။ သဟာဝ'ဿ ဒဿနသမ္ပဒါယ၊ တယ'ဿု ဓမ္မာ ဇဟိတာ ဘဝန္တိ။
သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ဝိစိကိစ္ဆိတဉ္စ၊ သီလဗ္ဗတံ ဝါပိ ယဒတ္ထိ ကိဉ္စိ။
၁၃။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်ကို ရသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်သာ လျှင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ဝိစိကိစ္ဆာ သီလဗ္ဗတပရာမာသ ဤတရားသုံးပါးတို့ကို ပယ်စွန့် အပ်ကုန်၏၊ ကိလေသာစိုးစဉ်းမျှ ရှိစေကာမူ-
၁၄။ စတူဟပါယေဟိ စ ဝိပ္ပမုတ္တော၊ ဆစ္စာဘိဌာနာနိ အဘဗ္ဗ ကာတုံ။
၁၄။ အပါယ်လေးပါးတို့မှလွတ်၏၊ (အနန္တရိယကံငါးပါးနှင့် နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဟူ သော) ခြောက်ပါးသောတရားတို့ကို မပြုတော့ပြီ၊ သံဃာဟူသော ဤရတနာ သည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြ ပါစေသတည်း။
၁၅။ ကိဉ္စာပိ သော ကမ္မ ကရောတိ ပါပကံ၊ ကာယေန ဝါစာ ဥဒ စေတသာ ဝါ။
အဘဗ္ဗ သော တဿ ပဋိစ္ဆဒါယ၊ အဘဗ္ဗတာ ဒိဋ္ဌပဒဿ ဝုတ္တာ။
၁၅။ ထို (သောတာပန်) ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကိုယ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း မကောင်းမှုကံကို ပြုစေကာမူ ထိုမိမိပြုသောကံ ကို မဖုံးလွှမ်းတော့ပြီ၊ နိဗ္ဗာန်ကို မြင်ပြီးသော (သောတာပန်) ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဖုံးလွှမ်းခြင်းမပြုတော့သည့်အဖြစ်ကို (မြတ်စွာဘုရား)ဟောအပ်၏၊ သံဃာဟူ သော ဤရတနာသည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် သတ္တဝါ တို့ ချမ်းသာကြပါစေသတည်း။
၁၆။ ဝနပ္ပဂုမ္ဗေ ယထာ ဖုဿိတဂ္ဂေ၊ ဂိမှာန မာသေ ပဌမသ္မိံဂိမှေ။
တထူပမံ ဓမ္မဝရံ အဒေသယိ၊ နိဗ္ဗာနဂါမိံ ပရမံ ဟိတာယ။
ဣဒမ္ပိ ဗုဒ္ဓေ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧတေန သစ္စေန သုဝတ္ထိ ဟောတု။
၁၆။ နွေဥတု၏အစဖြစ်သော တန်ခူးလ၏ ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်သော တောအုပ်သည် ကျက်သရေရှိ၍ တင့်တယ်သကဲ့သို့ ထိုတောအုပ်လျှင် ဥပမာရှိသော နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်စေတတ်သော (ပရိယတ္တိ) တရားတော်မြတ်ကို (နိဗ္ဗာန်) အကျိုးငှာ ဟောတော်မူ၏၊ ဘုရားဟူသော ဤရတနာသည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေသတည်း။
၁၇။ ဝရော ဝရညူ ဝရဒေါ ဝရာဟရော၊ အနုတ္တရော ဓမ္မဝရံ အဒေသယိ။
၁၇။ မြင့်မြတ်သည်ဖြစ်၍ မြင့်မြတ်သော နိဗ္ဗာန်ကိုသိတော်မူသော မြင့်မြတ်သော တရားကို ပေးတတ်သော မြင့်မြတ်သောမဂ်ကို ဆောင်တတ်သော မိမိထက် သာသူ မရှိသော မြတ်စွာဘုရားသည် မြင့်မြတ်သောတရားတော်ကို ဟောကြား တော်မူပြီ၊ ဘုရားဟူသော ဤရတနာသည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာ စကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
၁၈။ ခီဏံ ပုရာဏံ နဝ နတ္ထိ သမ္ဘဝံ၊ ဝိရတ္တစိတ္တာ' ယတိကေ ဘဝသ္မိံ။
တေ ခီဏဗီဇာ အဝိရူဠှိဆန္ဒာ၊ နိဗ္ဗန္တိ ဓီရာ ယထာယံ ပဒီပေါ။
၁၈။ (အကြင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အား) ကံဟောင်းကုန်ပြီ ကံသစ်မရှိတော့ပြီ၊ လာ လတ္တံ့သောဘဝ၌ တပ်မက်ခြင်း ကင်းသော စိတ်ရှိကုန်သည် ပဋိသန္ဓေမျိုးစေ့ ကုန်ပြီးသည်ဖြစ်၍ စည်ပင်ပြန့်ပွားသော ဆန္ဒမရှိကုန်၊ ဆီမီးသည်ငြိမ်းသကဲ့သို့ ပညာရှိသော ထိုရဟန္တာတို့သည် ခန္ဓာဇာတ်သိမ်းငြိမ်းကုန်ပြီ၊ သံဃာဟူသော ဤရတနာ သည်လည်း အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဤသစ္စာစကားကြောင့် (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
၁၉။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမ္မာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အန္တလိက္ခေ။
တထာဂတံ ဒေဝမနုဿပူဇိတံ၊ ဗုဒ္ဓံ နမဿာမ သုဝတ္ထိ ဟောတု။
၁၉။ မြေ၌တည်ကုန်သော နတ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်၌တည်ကုန် သော နတ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ဤအရပ်သို့ အညီအညွတ်လာကုန်၏ ထိုငါတို့သည် လာခြင်းကောင်းတော်မူသော နတ်လူတို့ပူဇော်အပ်သော မြတ်စွာ ဘုရားကို ရှိခိုးပါကုန်၏၊ (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
၂ဝ။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမ္မာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အန္တလိက္ခေ။
တထာဂတံ ဒေဝမနုဿပူဇိတံ၊ ဓမ္မံ နမဿာမ သုဝတ္ထိ ဟောတု။
၂ဝ။ မြေ၌တည်ကုန်သော နတ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်၌တည်ကုန် သော နတ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ဤအရပ်သို့ အညီအညွတ်လာကုန်၏ ထိုငါတို့သည် ကိလေသာတို့ကို ဖျက်ဆီးသောအားဖြင့်ဖြစ်သော နတ်လူတို့ ပူဇော်အပ်သော တရားတော်ကို ရှိခိုးပါကုန်၏၊ (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
၂၁။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမ္မာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အန္တလိက္ခေ။
တထာဂတံ ဒေဝမနုဿပူဇိတံ၊ သံဃံ နမဿာမ သုဝတ္ထိ ဟောတု။
၂၁။ မြေ၌တည်ကုန်သော နတ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်၌တည်ကုန် သော နတ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ဤအရပ်သို့ အညီအညွတ်လာကုန်၏ ထိုငါတို့သည် မချွတ်မယွင်း ကျင့်ခြင်းရှိတော်မူသော နတ်လူတို့ ပူဇော်အပ်သော သံဃာတော်ကို ရှိခိုးပါကုန်၏၊ (သတ္တဝါတို့) ချမ်းသာကြပါစေ သတည်း။
ရတနသုတ် မြန်မာပြန် ပြီး၏။
Posted by U Lawkanartha at 6/16/2008 04:20:00 PM Links to this post
မေတ္တသုတ် ရွတ်ဖတ်ရခြင်း အကျိုး
မေတ္တသုတ်ကို အမြဲမပြတ် ရွတ်ဖတ်လေ့ရှိသူတို့မှာ အခြောက်အလှန့်မခံရခြင်း၊ အနာရောဂါကင်းခြင်း၊ အိပ်မက်ဆိုး နိမိတ်ဆိုး အတိတ်ဆိုးများ မတွေ့ကြုံရခြင်း၊ လူနတ်အများချစ်ခင်ခြင်း၊ အဆိပ် လက်နက် မစူးရှခြင်း၊ ရူးသွပ်သော ဝေဒနာ ကင်းခြင်းမှစ၍ ဗြဟ္မာ့ဘုံရောက်သည်အထိ အကျိုးပေးနိုင်စွမ်း ရှိလေသည်။
Posted by U Lawkanartha at 6/16/2008 03:11:00 PM Links to this post
မြွေဘေးကင်းနိုင်သည်၊ အခြားအဆိပ်ရှိသော သတ္တဝါတို့ဘေးမှလည်း လွတ်နိုင် သည်၊ မြွေကိုက်ကင်းကိုက်ခံရသော အခါမျိုး၌လည်း အကြိမ်ကြိမ်ရွတ်နိုင်သည်၊ ဘေးရန်ကို ကျော်လွန်နိုင်သည်။
၁။ သဗ္ဗာသီဝိသဇာတီနံ၊ ဒိဗ္ဗမန္တာဂဒံ ဝိယ။
၂။ အာဏာခေတ္တမှိ သဗ္ဗတ္ထ၊ သဗ္ဗဒါ သဗ္ဗပါဏိနံ။
၁၊ ၂။ နတ်ဆေးဝါး နတ်မန္တရားသည် အလုံးစုံသော မြွေမျိုးလေးပါးတို့၏ လျင်သောအဆိပ် ကြမ်းသောအဆိပ်ကို ပယ်ဖျောက် ငြိမ်းအေးစေသကဲ့သို့ ဤခန္ဓပရိတ်တော်သည် အာဏာခေတ် စကြဝဠာကုဋေ တစ်သိန်းလုံး၌ နေထိုင် ကြကုန်သော သတ္တဝါအနန္တတို့အား လျင်သောအဆိပ် ကြမ်းသောအဆိပ်ကို လည်းကောင်း၊ ထိုမှတပါး သစ်, ကျား အစရှိသော ဘေးရန်အပေါင်းကို လည်းကောင်း၊ အလုံးစုံသော အခြင်းအရာဖြင့် အခါခပ်သိမ်း ပယ်ဖျောက်တား မြစ်နိုင်၏။
အို-သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ ထို ခန္ဓသုတ်ပရိတ်တော်ကို ငါတို့ ရွတ်ဖတ်ကြ ကုန်စို့။
၃။ ဝိရူပက္ခေဟိ မေ မေတ္တံ၊ မေတ္တံ ဧရာပထေဟိ မေ။
၃။ ဝိရူပက္ခ နဂါးမင်းတို့နှင့်တကွ အမျိုးအဆွေ မြွေတို့၌ ငါ၏ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် ပျံ့နှံ့စေသတည်း၊ ဧရာပထ နဂါးမင်းတို့နှင့်တကွ အမျိုးအဆွေ မြွေတို့၌ ငါ၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် ပျံ့နှံ့စေသတည်း၊ ဆဗျာပုတ္တ နဂါးမင်းတို့နှင့်တကွ အမျိုး အဆွေ မြွေတို့၌ ငါ၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် ပျံ့နှံ့စေသတည်း၊ ကဏှာဂေါတမ နဂါးမင်းတို့နှင့်တကွ အမျိုးအဆွေ မြွေတို့၌ ငါ၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် ပျံ့နှံ့စေသ တည်း။
၄။ အပါဒကေဟိ မေ မေတံ္တ၊ မေတံ္တ ဒွိပါဒကေဟိမေ။
၄။ ခြေမရှိသော သတ္တဝါတို့၌ ငါ၏ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် ပျံ့နှံ့စေသတည်း။ ခြေနှစ်ချောင်းရှိသော သတ္တဝါတို့၌ ငါ၏ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် ပျံ့နှံ့စေသတည်း။ ခြေလေးချောင်းရှိသော သတ္တဝါတို့၌ ငါ၏ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် ပျံ့နှံ့စေသတည်း။ များသောခြေရှိသော သတ္တဝါတို့၌ ငါ၏ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် ပျံ့နှံ့စေသတည်း။
၅။ မာ မံ အပါဒကော ဟိံသိ၊ မာ မံ ဟိံသိ ဒွိပါဒကော။
၅။ ခြေမရှိသော သတ္တဝါသည် ငါ့ကို မညှဉ်းဆဲပါစေသတည်း၊ ခြေနှစ်ချောင်း ရှိသော သတ္တဝါသည် ငါ့ကို မညှဉ်းဆဲပါစေသတည်း၊ ခြေလေးချောင်းရှိသော သတ္တဝါသည် ငါ့ကိုမညှဉ်းဆဲပါစေသတည်း၊ များသောခြေရှိသော သတ္တဝါသည် ငါ့ကို မညှဉ်းဆဲပါစေသတည်း၊
၆။ သဗ္ဗေ သတ္တာ သဗ္ဗေပါဏာ၊ သဗ္ဗေ ဘူတာ စ ကေဝလာ။
၆။ ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါအလုံးစုံ ထွက်သက်,ဝင်သက် ရှိသော သတ္တဝါအလုံးစုံ အတ္တဘောထင်ရှားရှိသော သတ္တဝါ ဤသတ္တဝါအားလုံးတို့သည် ကောင်းမြတ် သော အာရုံတို့ကို တွေ့မြင်ကြပါစေကုန်သတည်း၊ မကောင်းသော အာရုံသည် ထိုသတ္တဝါတို့၏ အထံသို့ မကပ် ရောက်ပါစေသတည်း။
၇။ အပ္ပမာဏော ဗုဒ္ဓေါ၊ အပ္ပမာဏော ဓမ္မော။
၇။ မြတ်စွာဘုရားသည် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ပြုတတ်သော ကိလေသာမရှိ၊ တရား တော်သည် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ပြုတတ်သော ကိလေသာမရှိ၊ သံဃာတော်သည် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ပြုတတ်သော ကိလေသာမရှိ၊ ရင်ဖြင့် တွား၍ သွားတတ်ကုန် သော မြွေ၊ ကင်းမြီးကောက်, ကင်းခြေများ, ပင့်ကူ, တက်တူ, ကြွက်တို့သည် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ပြုတတ်သော ကိလေသာ ရှိကုန်၏။
၈။ ကတာ မေ ရက္ခာ, ကတံ မေ ပရိတ္တံ၊ ပဋိက္ကမန္တု ဘူတာနိ။
၈။ ငါသည် အစောင့်အရှောက်ကို ပြုလုပ်အပ်ပြီ၊ ငါသည် အရံအတားကို ပြုလုပ်အပ်ပြီ၊ အကျိုးမဲ့ကို အလိုရှိသော သတ္တဝါတို့သည် ဖဲခွါ ထွက်သွားကြလေ ကုန်လော့၊ ငါသည် ရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအား ရိုသေမြတ်နိုး လက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးပါ၏။ ဝိပဿီအစရှိသော ခုနှစ်ဆူကုန်သော ဘုရားရှင်တို့ အားလည်း ရိုသေမြတ်နိုး လက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏။
ခန္ဓသုတ်တော် မြန်မာပြန် ပြီး၏။
Posted by U Lawkanartha at 6/16/2008 02:34:00 PM Links to this post
မောရသုတ် ရွတ်ဖတ်ရခြင်း အကျိုး
ပီယဆေးခတ်ခြင်း၊ ပုဏ္ဏကတိုက်ခြင်း စသည်ဖြင့် သူတစ်ပါးတို့က မကောင်း မကြံနိုင်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် အပျိုရည် အပျို့သိက္ခာကို မြတ်နိုးသော မိန်းကလေးများအတွက် အကာအကွယ်ကောင်း ဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ပြုရန် တစ်စုံတစ်ယောက်က မိမိနောက်သို့ လိုက်နေသောအခါများ တွင် ရွတ်နိုင်သည်၊ သူတစ်ပါးက မိမိ၏ရာထူးအခြေအနေ လျှောကြအောင် ကြံစည်နေလျှင်လည်း အကာအကွယ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှု မခံရအောင်လည်း စွမ်းပေသေးသည်။
၁။ ပူရေန္တံ ဗောဓိသမ္ဘာရေ၊ နိဗ္ဗတ္တံ မောရယောနိယံ။
၂။ စိရဿံ ဝါယမန္တာပိ၊ နေဝ သက္ခိံသု ဂဏှိတုံ။
၁-၂။ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်၏ အခြေခံအဆောက်အဦ ဖြစ်သော ပါရမီတို့ကို ဖြည့်ကျင့်တော်မူစဉ်အခါ ဥဒေါင်းမျိုး၌ ဖြစ်တော်မူခိုက် ဘုရားအလောင်း ဥဒေါင်းမင်းသည် ဤမောရပရိတ်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဘေးအန္တရာယ် ကင်းအောင် စီရင်ထားလေသည်။ မုဆိုးတို့သည် ဘုရား အလောင်းဥဒေါင်းမင်းကို ဖမ်းယူရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း ဖမ်း၍ မရနိုင်ကြကုန်၊ ဤ မောရ ပရိတ်ကို မြတ်သော မန္တရားဟူ၍ပင် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့၏။
ယခုအခါ ဤမောရပရိတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုပေါင်း ရွတ်ဆိုကြကုန်စို့။
၃။ ဥဒေတ'ယံ စက္ခုမာ ဧကရာဇာ၊ ဟရိဿဝဏ္ဏော ပထဝိပ္ပဘာသော။
၃။ နေမင်းသည် လူတို့၏ မျက်စိသဖွယ်လည်းဖြစ်၏၊ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော မင်းလည်းဖြစ်၏၊ ရွှေအဆင်းနှင့်တူသော အဆင်းလည်းရှိ၏၊ မြေပြင်တစ်ခုလုံးကို ထွန်းပသော အလင်းရောင်လည်းရှိ၏၊ ယခု ဤနေမင်းသည် တက်လတ်ပေ၏။ ကျွန်ုပ်သည် ရွှေအဆင်းရှိသော မြေပြင်၌ ထွန်းလင်းတောက်ပသော ဤနေမင်း ကို ရှိခိုးပါ၏၊ ရိုသေပါ၏။ ယနေ့တစ်နေ့လုံး အသင်နေမင်း၏ အစောင့် အရှောက်ကို ခံယူပြီး ကျွန်ုပ်နေပါအံ့။
၄။ ယေ ဗြာဟ္မဏာ ဝေဒဂူ သဗ္ဗဓမ္မေ၊
၄။ မြတ်စွာဘုရားတို့မည်သည်မှာ မကောင်းမှုဟူသမျှကို အပပြုကုန်ပြီးဖြစ်၏၊ တရားအားလုံးကို သိမြင်တော်မူကြ ပြီးဖြစ်၏၊ ထိုဘုရားရှင်တို့အား ကျွန်ုပ် ရှိခိုးပါ၏။ ထို ဘုရားရှင်တို့ကလည်း ကျွန်ုပ်ကို စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန် သတည်း။ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်း ရှိခိုးပါ၏။ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်, သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်အားလည်း ရှိခိုးပါ၏။ ကိလေသာမှ ကင်းလွတ် ကုန်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်း ရှိခိုးပါ၏။ အရဟတ္တဖိုလ်တရား အားလည်း ရှိခိုးပါ၏။ ဦးညွတ်ပါ၏။
ဤသို့လျှင် ဘုရားလောင်း ဥဒေါင်းမင်းသည် ပရိတ် အရံအတားကို ပြုပြီးမှ အစာရှာထွက်လေ၏။
၅။ အပေတ'ယံ စက္ခုမာ ဧကရာဇာ၊
၅။ နေမင်းသည် လူတို့၏ မျက်စိနှင့်တူ၏၊ မြတ်သောမင်းလည်းဖြစ်၏၊ ရွှေ အဆင်းအရောင်လည်းရှိ၏၊ မြေပြင်၌လည်း ထွန်းလင်းတောက်ပ၏၊ ဤနေမင်း သည် ယခုဝင်လေ၏။ ကျွန်ုပ်သည် ရွှေအဆင်းရှိသောမြေပြင်၌ တောက်ပသော အရောင်ရှိသော ရှင်နေမင်းကို ဦးညွတ်ရှိခိုးပါ၏၊ ယခုတစ်ညဉ့်လုံး အရှင်နေမင်း ၏ အစောင့်အရှောက်ကို ခံယူ၍ ကျွန်ုပ်နေပါအံ့။
၆။ ယေ ဗြာဟ္မဏာ ဝေဒဂူ သဗ္ဗဓမ္မေ၊
၆။ မကောင်းမှုဟူသမျှကို ဖယ်ရှားပြီး တရားအလုံးစုံကို သိတော်မူကုန်သော ဘုရားရှင်တို့အား ဦးညွတ်ရှိခိုးပါ၏။ ထို ဘုရားရှင်တို့သည် ကျွန်ုပ်ကို စောင့်ရှောက်ပါစေသတည်း။ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ပြီးသော အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား လည်းကောင်း၊ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်, သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်အား လည်းကောင်း၊ ကိလေသာ အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်မြောက်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား လည်းကောင်း၊ အရဟတ္တဖိုလ် တရားတော်အား လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါ၏။ ဦးညွတ်ပါ၏။
ဤသို့လျှင် ဥဒေါင်းမင်းသည် ပရိတ်အရံအတားကိုပြု၍ ညဉ့်အခါ၌ နေလေ၏။
မောရသုတ် မြန်မာပြန် ပြီး၏။
Posted by U Lawkanartha at 6/16/2008 02:21:00 PM Links to this post
မီးဘေးလွတ်ကင်းစေနိုင်ပါသည်၊ မိမိကိုယ်တိုင် မီးဘေး မသင့်ရအောင် မိမိအိမ် မိမိရပ်ကွက် မီးဘေးကင်းအောင် သစ္စာပြုနိုင်သည်။
၁။ ပူရေန္တံ ဗောဓိသမ္ဘာရေ၊ နိဗ္ဗတ္တံ ဝဋ္ဋဇာတိယံ။
၁။ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို ရရှိခြင်း၏ အခြေခံဖြစ်သော ပါရမီတို့ကို ဖြည့်ကျင့် သော ဘုရားအလောင်းသည် နုစဉ်ဘဝက ငုံးငှက်မျိုး၌ ဖြစ်ရလေသည်။ ဘုရား အလောင်း ငုံးငယ်ကို ဤပရိတ်တော်၏ တန်ခိုးကြောင့် တောမီးကွင်းရလေ၏။
၂။ ဤပရိတ်တော်ကို အရှင်သာရိပုတ္တရာ မဟာထေရ်မြတ်အား မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့၏။ ဤပရိတ်တော်သည် ကမ္ဘာတည်လိမ့်မည်။ တန်ခိုး လွန်စွာကြီး၏။ ယခုအခါ ထိုငုံးမင်းပရိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုပေါင်းရွတ်ဆိုကြပါစို့။
၃။ အတ္ထိ လောကေ သီလဂုဏော၊ သစ္စံ သောစေယျ' နုဒ္ဒယာ။
၃။ လောက၌ သီလ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးသည် ရှိပေ၏။ မှန်ကန်သော သစ္စာစကား သည် ရှိပေ၏။ ကိုယ်ရေး, နှုတ်ရေး, စိတ်ရေး လုံးဝစင်ကြယ်ခြင်းသည် ရှိပေ၏။ သတ္တဝါတို့အား ကြင်နာသနားခြင်းသည် ရှိပေ၏။ ဤသို့သော သစ္စာစကားဖြင့် အတုမရှိသော သစ္စာပြုခြင်းကို ငါဘုရားနုစဉ်က ပြုခဲ့ဖူးလေပြီ။
၄။ အာဝဇ္ဇေတွာ ဓမ္မဗလံ၊ သရိတွာ ပုဗ္ဗကေ ဇိနေ။
၄။ သစ္စာတရား၏ စွမ်းပကားကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး ရှေးရှေး သောဘုရားရှင် တို့ကို အောက်မေ့သတိရပြီး သစ္စာ၏ အစွမ်းကို အမှီပြု၍ သစ္စာပြုခဲ့ဖူးလေပြီ။
၅။ သန္တိ ပက္ခာ အပတနာ၊ သန္တိ ပါဒါ အဝဉ္စနာ။
၅။ အို တောမီး ငါ့မှာ အတောင်တို့ ရှိပါသော်လည်း မပျံနိုင်သေးပါ၊ ငါ့မှာ ခြေတို့ ရှိပါသော်လည်း မသွားတတ်သေးပါ၊ ငါ၏ မိဘတို့သည်လည်း (ငါ့ကိုထား၍) ထွက်သွားကြလေပြီ၊ အို တောမီး ငါ့ကို ဖဲကြဉ်ပါလော့။
၆။ ချစ်သားသာရိပုတ္တရာ ဤကဲ့သို့ ငါဘုရားလောင်း ငုံးငယ်က သစ္စာပြုလိုက် သောအခါ သစ္စာပြုပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် တောမီးသည် ရေသို့ရောက်၍ ဖဲကြဉ်ရသကဲ့သို့ ငါ့ကို ဖဲကြဉ်လေ၏၊ အရှိန်အလျှံကြီးမားလှသော တောမီးသည် မင်းပယ် ၁၆-ပယ်စာခန့်မျှ ကွင်းလေ၏။ ချစ်သားသာရိပုတ္တရာ ငါ၏သစ္စာစကား နှင့်တူသော တရားမည်သည် မရှိချေ၊ ဤပါရမီကား ငါဘုရား၏ သစ္စာပါရမီပင် ဖြစ်တော့သည်။
ဝဋ္ဋသုတ်တော် မြန်မာပြန် ပြီး၏။
Posted by U Lawkanartha at 6/16/2008 02:05:00 PM Links to this post
ဓဇဂ္ဂသုတ် ရွတ်ဖတ်ရခြင်း အကျိုးတရား
ဤသုတ်ကို ရွတ်ဖတ်ပွားများလျှင် ပိုမို၍ ဉာဏ်ကောင်းလာစေနိုင်သည်။ မည်သည့်နေရာသို့ဖြစ်စေ နေ့နေ့ညည တစ်ယောက်တည်းသွားရဲ၊ လာရဲ၊ နေရဲစေသည်။ စိတ်တန်ခိုးလည်းကြီးလာလိမ့်မည်၊ ပရိတ်သတ်အလယ်မှာ ပြောရဲ ဆိုရဲ ရှိလာနိုင်သည်။ မိမိ၏ ဘဝအခြေအနေ ခိုင်မြဲစေသည်၊ ရာထူးတည်မြဲရေး, စည်းစိမ်တည်မြဲရေးအတွက် အကျိုးပြုလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
၁။ ယဿာ' နုဿရဏေနာပိ၊ အန္တလိက္ခေပိ ပါဏိနော။
၁။ ဤဓဇဂ္ဂသုတ်ပရိတ်တော်ကို အောက်မေ့ဆင်ခြင်ကာမျှဖြင့် ကောင်းကင်၌ပင် တည်ခိုက်ကြုံသော်လည်း မြေပြင်မှာလို ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ တည်ခွင့်ရလေသည်။
၂။ သဗ္ဗုပဒ္ဒဝဇာလမှာ၊ ယက္ခစောရာဒိသမ္ဘဝါ။
၂။ ဤဓဇဂ္ဂသုတ်ပရိတ်တော်ကြောင့် ဘီလူးဘေး၊ ခိုးသူဘေးစသော ဘေး အန္တရာယ်အသွယ်သွယ်မှ လွတ်မြောက်ကြရသောလူတို့ကို ရေတွက်၍ပင် မကုန်နိုင်ပါချေ။
ယခုအခါ ဤပရိတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုပေါင်းရွတ်ကြပါကုန်စို့။
၃။ သံဃဥက္ကဋ္ဌ သံဃနာယကဖြစ်တော်မူသော မဟာကဿဖအရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ် အာနန္ဒာထေရ်သည် ဤဓဇဂ္ဂသုတ်ပရိတ်တော်ကို မြတ်စွာဘုရားထံမှ တိုက်ရိုက် ဤကဲ့သို့ ကြားနာမှတ်သားထားလိုက်ပါ၏။
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ်သေဋ္ဌေးကြီး၏ နှလုံးမွေ့လျော် ပျော်ဖွယ်ရာရှိသော ဇေတဝန်ကျောင်းကြီး၌ သီတင်းသုံးနေတော် မူပါသည်။
၄။ တတြ ခေါ ဘဂဝါ ဘိက္ခူ အာမန္တေသိ ''ဘိက္ခဝေါ''တိ။''ဘဒန္တေ''တိ တေ ဘိက္ခူ ဘဂဝတော ပစ္စေဿာသုံ။
၄။ ထိုသို့နေတော်မူစဉ်အခါ မြတ်စွာဘုရားက ''ရဟန်းတို့''ဟူ၍ ရဟန်းအများကို ခေါ်တော်မူပါသည်။ ရဟန်းတို့လည်း မြတ်စွာဘုရား စကားတော်ကို ခံယူရန် အသင့်ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက ဤသို့ မိန့်ကြားဟောမြွက် တော် မူပါသည်။
ချစ်သားတို့ ရှေးအခါက တာဝတိံသာနတ်နှင့် အသုရာနတ်စစ်သည်တို့ စစ်ခင်းခဲ့ကြဖူး၏။ ထိုအခါ သိကြားမင်းသည် တာဝတိံသာနတ်စစ်သည်တို့ကို ခေါ်ယူပြီး ဤသို့ ပြောကြားခဲ့၏။ ''အမောင်နတ်သားတို့ သင်တို့သည် စစ်မြေပြင်မှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့ သည်ရှိသော် ငါသိကြားမင်း၏ တံခွန်ဖျားကို မော်၍ ကြည့်လိုက်ကြကုန်လော့၊ ဤသို့ ကြည့်လိုက်ပါလျှင် သင်တို့ အကြောက်ပြေကြလိမ့်မည်။ မတုန်မလှုပ် ရဲရင့်လာကြလိမ့်မည်၊ ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်းများလည်း ပြေပျောက်သွားကြ လိမ့်မည်''။
၅။ နော စေ မေ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကေယျာထ၊ အထ ပဇာပတိဿ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကေ ယျာထ။ ပဇာပတိဿ ဟိ ဝေါ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကယတံ ယံ ဘဝိဿတိ ဘယံ ဝါ ဆမ္ဘိ တတ္တံ ဝါ လောမဟံသော ဝါ သော ပဟီယိဿတိ။
၅။ ''အကယ်၍ ငါ၏ တံခွန်ဖျားကို မော်၍ မကြည့်ဖြစ်လျှင် ပဇာပတိနတ်မင်း၏ တံခွန်ဖျားကို မော်၍ ကြည့်ကြ၊ ဤသို့ ပဇာပတိနတ်မင်း၏ တံခွန်ဖျားကို ကြည့်ကြလျှင်လည်း ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်းများ ပျောက်ကင်းသွားလိမ့် မည်''။
၆။ နော စေ ပဇာပတိဿ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကေယျာထ၊ အထ ဝရုဏဿ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကေယျာထ။ ဝရုဏဿ ဟိ ဝေါ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကယတံ၊ ယံ ဘဝိဿတိ ဘယံ ဝါ ဆမ္ဘိတတ္တံ ဝါ လောမဟံသော ဝါ သော ပဟီယိဿတိ။
၆။ ''အကယ်၍ ပဇာပတိနတ်မင်း၏ တံခွန်ဖျားကို မော်၍ မကြည့်ဖြစ်လျှင် ဝရုဏနတ်မင်း၏ တံခွန်ဖျားကို မော်၍ကြည့်ကြ၊ ဤသို့ ဝရုဏနတ်မင်း၏ တံခွန်ဖျားကို ကြည့်ကြလျှင်လည်း ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီး မွေးညင်း ထခြင်းများ ကင်းပျောက်သွားလိမ့်မည်''။
၇။ နော စေ ဝရုဏဿ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကေယျာထ၊ အထ ဤသာန-ဿ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကေယျာထ။ ဤသာနဿ ဟိ ဝေါ ဒေဝရာဇ-ဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကယတံ၊ ယံ ဘဝိဿတိ ဘယံ ဝါ ဆမ္ဘိတတ္တံ ဝါ လောမဟံ-သော ဝါ သော ပဟီယိဿတီတိ။
၇။ ''အကယ်၍ ဝရုဏနတ်မင်း၏ တံခွန်ဖျားကို မော်၍ မကြည့်ဖြစ်လျှင် ဤသာနနတ်မင်း၏ တံခွန်ဖျားကို မော်၍ကြည့်ကြ၊ ဤသို့ ဤသာနနတ်မင်း၏ တံခွန်ဖျားကို ကြည့်ကြလျှင်လည်း ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေး ညင်း ထခြင်းများ ပြေပျောက်သွားလိမ့်မည်''။
ဤသို့လျှင် သိကြားမင်းက တာဝတိံသာနတ်တို့ကို အသိပေးလေ၏။
၈။ တံ ခေါ ပန ဘိက္ခဝေ သက္ကဿ ဝါ ဒေဝါန မိန္ဒဿ ဓဇဂံ္ဂ ဥလ္လောကယတံ ပဇာပတိဿ ဝါ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကယတံ ဝရုဏဿ ဝါ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကယတံ ဤသာနဿ ဝါ ဒေဝရာဇဿ ဓဇဂ္ဂံ ဥလ္လောကယတံ ယံ ဘဝိဿ တိ ဘယံ ဝါ ဆမ္ဘိတတ္တံ ဝါ လောမဟံသော ဝါ သော ပဟီယေထာပိ နောပိ ပဟီယေထ။
၈။ ချစ်သားရဟန်းတို့ နတ်တို့အရှင် သိကြားမင်း၏ တံခွန်ဖျားကို မော်၍ ကြည့်သောနတ်များ၊ သို့တည်း မဟုတ် ပဇာပတိနတ်မင်း၊ ဝရုဏနတ်မင်း၊ ဤသာနနတ်မင်းတို့၏ တံခွန်ဖျားကို မော်၍ကြည့်သော နတ်များအား ကြောက် လန့်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ကြက်သီး မွေးညင်းထခြင်းများ ပျောက်သော်လည်း ပျောက်မည်၊ မပျောက်ဘဲလည်း နေချင်နေလိမ့်မည်။
၉။ တံ ကိဿ ဟေတု?
၉။ အကြောင်းမူကား နတ်တို့အရှင်သိကြားမင်းလည်း ရာဂကင်းသူမဟုတ်၊ ဒေါသကင်းသူမဟုတ်၊ မောဟကင်းသူမဟုတ်။ သူကိုယ်နှိုက်က ကြောက်တတ် ၏၊ တဆတ်ဆတ်တုန်တတ်၏၊ လန့်ဖျပ်တတ်၏၊ ထွက်ပြေးတတ်၏။
၁ဝ။ အဟဉ္စ ခေါ ဘိက္ခဝေ ဧဝံ ဝဒါမိ-
၁ဝ။ ချစ်သားရဟန်းတို့ ငါဘုရားသည်ကား မလွဲ ဧကန် ဤသို့ ဟောပေအံ့၊ တောထဲ၌ တစ်ပါးတည်း နေသောအခါ၊ သစ်ပင်ရင်း၌နေသောအခါ၊ ဆိတ်ငြိမ် ရာတွင်နေသောအခါများ၌ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်း ထခြင်း တစ်ခုခု ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ဘုရားဂုဏ်တော်ကို ဤသို့အောက်မေ့ကြလော့။
၁၁။ ''ဣတိပိ သော ဘဂဝါ အရဟံ,
၁၁။ မြတ်စွာဘုရားသည် ကိလေသာတို့မှ ကင်းဝေးတော်မူ၏၊ ကိလေသာ ရန်သူတို့ကို ပယ်သတ်ပြီး ဖြစ်၏၊ သံသရာစက်ဝန်း၏ အကန့်အထောက်များကို ဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်၏၊ ပစ္စည်းလေးပါး ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်၏၊ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ပင်လျှင် မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကို ရှောင်တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''အရဟံ'' ဟူသော ဂုဏ်တော်နှင့် ပြည့်စုံပါပေသည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် ကောင်းမွန်လှစွာ သယမ္ဘူဉာဏ်မြတ်မဟာဖြင့် မိမိအလိုလို သစ္စာလေးပါး တရားမြတ်ကို ထိုးထွင်း၍သိတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓေါ'' ဟူသော ဂုဏ်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏
မြတ်စွာဘုရားသည် ဝိဇ္ဇာသုံးပါး၊ ဝိဇ္ဇာရှစ်ပါး၊ စရဏ တစ်ဆယ့်ငါးပါးတို့နှင့် လုံးဝဥဿုံပြည့်စုံတော်မူပေ၏ သို့ဖြစ်၍ ''ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော''ဟူသော ဂုဏ် တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် နိဗ္ဗာန်သို့သာလျှင် ဖြောင့်ဖြောင့် မတ်မတ် ကောင်းစွာ သွားတော်မူ၏၊ စကားဆိုရန် ခွင့်ခြောက်တန်တို့တွင် ဟုတ်မှန်ကျိုးကြောင်း စကားကောင်းကိုသာ ဆိုတော်မူတတ်၏။ သို့ဖြစ်၍ ''သုဂတော''ဟူသော ဂုဏ် တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် ကာမလောက၊ ရူပလောက၊ အရူပလောကဟူသော လောကသုံးပါး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် သတ္တလောက၊ သင်္ခါရလောက၊ သြကာသ လောကဟူသော လောကကြီးသုံးပါးတို့ကို မဖောက်မပြန် သယမ္ဘူဉာဏ်ဖြင့် အမှန်ထိုးထွင်း အလင်းထင်ပေါ် သိမြင်တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''လောကဝိဒူ'' ဟူ သော ဂုဏ်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အတုမရှိ၊ သူတစ်ပါးတို့အားလည်း အတုမရှိသော မိမိ၏တရားဖြင့် ဆုံးမတတ်၏၊ ဆုံးမထိုက်သော လူ၊ နတ်၊ ဘီလူး၊ တိရစ္ဆာန်ကြမ်းများကိုပင် သေဝပ်ငြိမ်သက်အောင် နိုင်နင်းစွာ ဆုံးမတော် မူနိုင်၏။ သို့ဖြစ်၍ ''အနုတ္တရော ပုရိသဒမ္မသာရထိ'' ဟူသော ဂုဏ်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် လူအပေါင်း၊ နတ်အပေါင်းတို့အား ကောင်းစွာ သွန်သင် ဆုံးမတတ်သော လူနတ်တို့၏ ဆရာကောင်းဖြစ်တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ''ဟူသော ဂုဏ်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော် မူပါပေ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် တရားအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူ ၏၊ သူတစ်ပါးတို့အားလည်း သစ္စာလေးပါးတရားကို သိမြင်အောင် ဟောပြော ပြသနိုင်၏။ သို့ဖြစ်၍ ''ဗုဒ္ဓေါ''ဟူသောဂုဏ်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် အစိုးရခြင်း၊ တရားရှိခြင်း၊ အခြံအရံများခြင်း၊ ကျက်သရေ ရှိခြင်း၊ အလိုအတိုင်းဖြစ်ခြင်း၊ လုံ့လစွမ်းအားအပြည့်ရှိခြင်းဟူသော ဘုန်းတော် ခြောက်ပါးနှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူပေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''ဘဂဝါ''ဟူသော ဂုဏ်တော် နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။
၁၂။ မမံ ဟိ ဝေါ ဘိက္ခဝေ အနုဿရတံ
၁၂။ ဤကဲ့သို့ ငါဘုရား၏ ဂုဏ်တော် ကျေးဇူးတော် တို့ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ ကြလော့။ ဘုရားဂုဏ်ကို ဆင်ခြင် အောက်မေ့မိသည်ရှိသော် သင်တို့အား ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်းထ ခြင်းဟူသမျှ ပျောက်ကင်း သွားပေလိမ့်မည်။
၁၃။ နော စေ မံ အနုဿရေယျာထ၊
၁၃။ အကယ်၍ ဘုရားဂုဏ်ကို မဆင်ခြင်၊ မအောက် မေ့မိသည်ရှိသော် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထားသော တရားတော်၏ ဂုဏ်တော်ကို ဤသို့ အောက်မေ့ သတိရကြ။
၁၄။ ''သွာက္ခာတော ဘဂဝတာ ဓမ္မော,
၁၄။ တရားတော်သည် မြတ်စွာဘုရားက ကောင်းစွာ ဟောကြားထားသော တရားတော် ဖြစ်သောကြောင့် ''သွာက္ခာတ'' ဟူသော ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံပါပေ သည်။
တရားတော်သည် မျက်မှောက်၌ပင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ပေးတတ်သော ကြောင့် ''သန္ဒိဋ္ဌိက'' ဟူသော ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံပါပေသည်။
တရားတော်သည် အခါမလင့် အကျိုးပေးတတ်သောကြောင့် ''အကာလိက'' ဟူသော ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံပါ ပေသည်။
တရားတော်သည် လာပါ, ရှုပါ, ကျင့်ကြံပါဟူ၍ မပါပါအောင် ခေါ်ဆောင်တိုက် တွန်း ပြညွှန်းခြင်းငှာ ထိုက်သောကြောင့် ''ဧဟိပဿိက'' ဟူသော ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံပါပေသည်။
တရားတော်သည် လူတို့အား နတ်ရွာနိဗ္ဗာန်သို့ ပို့ဆောင် ပေးတတ်သောကြောင့် ''သြပနေယျိက'' ဟူသော ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံပါပေသည်။
တရားတော်သည် ပညာရှိသူ ရှင်လူအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ အနေဖြင့် အသီးသီး တစ်ဦးစီ တစ်ဦးစီ မိမိတို့၏စိတ်၌ ကပ်၍ ဆောင်ထားထိုက်သော ကြောင့် ''ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ဝိညူဟိ'' ဟူသော ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံပါပေသည်။
၁၅။ ဓမ္မံ ဟိ ဝေါ ဘိက္ခဝေ အနုဿရတံ
၁၅။ ဤသို့လျှင် တရားတော်၏ ဂုဏ်တော်ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့မိသောသူအား ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွှေးညင်း ထခြင်းဟူသမျှ လုံးဝ ပျောက်ကင်း သွားပေလိမ့်မည်။
၁၆။ နော စေ ဓမ္မံ အနုဿရေယာထ၊
၁၆။ အကယ်၍များ ဘုရားဂုဏ်ကိုသော် လည်းကောင်း၊ တရားဂုဏ်ကိုသော် လည်းကောင်း၊ မဆင်ခြင် မအောက်မေ့ဖြစ်ပါက မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သား သံဃာတော်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အောက်မေ့ရာ၏။
၁၇။ ''သုပ္ပဋိပန္နော ဘဂဝတော သာဝကသံဃော,
၁၇။ မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သား သံဃာတော်သည် နိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာ ကောင်းသော အကျင့်ကိုသာ ကျင့်တော်မူတတ်ပါပေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''သုပ္ပဋိပန္နော'' ဟူသောဂုဏ်ရှိပေ၏။
သံဃာတော်သည် နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ်ရရှိရေးအတွက် ဖြောင့်မတ်စွာ လမ်းမှန်သော အကျင့်ကိုသာ ကျင့်တော်မူပါပေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''ဥဇုပ္ပဋိပန္နော'' ဟူသော ဂုဏ် ရှိပေ၏။
သံဃာတော်သည် နိဗ္ဗာန်ရရှိရေးနှင့် သင့်လျော် လျောက်ပတ်သောအကျင့်ကို သာ ကျင့်တော်မူပါပေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''ဉာယပ္ပဋိပန္နော'' ဟူသော ဂုဏ်ရှိပေ၏။
သံဃာတော်သည် အရိုအသေပြုခြင်းကို ခံယူထိုက်အောင် အကျင့်သီလကို ကောင်းစွာ ဖြည့်ကျင့်တော် မူပါပေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''သာမီစိပ္ပဋိပန္နော'' ဟူသော ဂုဏ်ရှိပေ၏။
ထိုဘုရားတပည့် အရိယာသံဃာသည် (အချုပ်အားဖြင့်) အရေအတွက်လေးစုံ ပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ယောက်ရှိပေ၏။ ထိုသံဃာတော်သည် အဝေးမှ တကူးတကဆောင်ယူ ၍ ပူဇော်သမှုပြုခြင်းကိုလည်း ခံယူထိုက်၏။ သို့ဖြစ်၍ ''အာဟုနေယျော'' ဟူသောဂုဏ်ရှိပေ၏။
ဧည့်သည်တို့အားရည်စူး၍ အထူးပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းဝတ္ထုတို့ကိုလည်း မိမိအားလှူလျှင် ကောင်းစွာ ခံယူထိုက်ပေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''ပါဟုနေယျော''ဟူသော ဂုဏ်ရှိပေ၏။
လောက၌ အမြတ်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်သော အလှူကိုလည်း ထိုက်ထိုက် တန်တန် ခံယူနိုင်ပေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ''ဒက္ခိဏေယျော'' ဟူသော ဂုဏ်ရှိပေ၏။
လူနတ်တို့၏ ရှိခိုးခြင်းကိုလည်း ခံထိုက်၏။ သို့ဖြစ်၍ ''အဉ္ဇလီကရဏီယော'' ဟူသောဂုဏ်ရှိပေ၏။
လူတို့က ကောင်းမှုတည်းဟူသော မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးရာ ကြဲချရာ အတုမရှိ လယ်ယာမြေကောင်းသဖွယ်လည်း ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်၍ ''အနုတ္တရံ ပုညက္ခေတ္တံ လောကဿ'' ဟူသော ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံပေ၏။
၁၈။ သံဃံ ဟိ ဝေါ ဘိက္ခဝေ အနုဿရတံ
၁၈။ ဤသို့လျှင် သံဃာတော်၏ဂုဏ်တော် ကျေးဇူးတော်တို့ကို ဆင်ခြင်အောက် မေ့ ရာ၏။ သံဃာ့ဂုဏ်သို့ စိတ်ညွတ်၍ အာရုံပြုမိသောသင်တို့အား ကြောက်လန့် ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်း ဟူသမျှ ကင်းပျောက်သွား လိမ့်မည်။
၁၉။ တံ ကိဿ ဟေတု?
၁၉။ ထိုစကားမှန်ပေ၏။ အကြောင်းမူကား ဝိပဿီ စသော ရှေးရှေးသော ဘုရားရှင်များနည်းတူ ကောင်းစွာပွင့်ထွန်းလာသော ငါဘုရားသည် လူသူ လေးပါးကင်းသည့် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ပင် မကောင်းမှုကို မပြုမလုပ်၊ ကောင်းစွာ ကိုယ်တိုင် သစ္စာတရားမြတ်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်၏။ တဏှာရာဂ လုံးဝကင်း၏။ အမျက်ဒေါသ လုံးဝကင်း၏။ မသိမောဟ လုံးဝ ကင်း၏။ အကြောက်အလန့်မရှိ၊ ကြောက်၍တုန်လှုပ် သည်ဟူ၍ လုံးဝမရှိ၊ ကြောက်လန့်၍ ထွက်ပြေး သည်ဟူ၍လည်း ဘယ်ခါမျှမရှိ၊ သို့ကြောင့် ဤသို့ သော ဘုရားဂုဏ် တရားဂုဏ် သံဃာဂုဏ်ကို အာရုံညွှတ်၍ ကြည်ညိုစိတ်ထား ပွားများသူမှာ ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်းဟူသမျှ ကင်းပျောက်ရမြဲ ဖြစ်လေသည်။
၂ဝ။ ဣဒ မဝေါစ ဘဂဝါ၊ ဣဒံ ဝတွာန သုဂတော
၂ဝ။ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားကို မိန့်တော်မူ၏။ ထို့နောက် ဆက်လက်၍ ဤသို့တဖန် မိန့်ကြားတော်မူပြန်၏-
၂၁။ အရညေ ရုက္ခမူလေ ဝါ၊
၂၁။ ''ချစ်သားရဟန်းတို့ သင်တို့သည် တော၌ဖြစ်စေ၊ သစ်ပင်ရင်း၌ ဖြစ်စေ၊ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဖြစ်စေ၊ ဘုရားဂုဏ်ကို သတိရကြ၊ သတိရလျှင် သင်တို့ မကြောက်မရွံ့ နေနိုင်ကြလတ္တံ့။
၂၂။ နော စေ ဗုဒ္ဓံ သရေယျာထ၊
၂၂။ လူနတ်တို့၏ အကြီးအမြတ် ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်တော် ကို မဆင်ခြင် မအောက်မေ့ဖြစ်ကြလျှင် သံသရာမှ ထွက်မြောက်ကြောင်း ကောင်းစွာ ဟောကြားထားသော တရားတော်၏ဂုဏ်ကို သတိရကြ။
၂၃။ နော စေ ဓမ္မံ သရေယျာထ၊
၂၃။ တရားတော်၏ဂုဏ်ကို အမှတ်မရကြလျှင် ကောင်းမှုမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးရာ အတုမရှိ လယ်မြေကောင်း နှင့်တူသော သံဃာတော်၏ ဂုဏ်တော်ကို ဆင်ခြင် ပွားများကြ။
၂၄။ ဧဝံ ဗုဒ္ဓံ သရန္တာနံ၊
၂၄။ ဤကဲ့သို့ မြတ်စွာဘုရား၏ ကျေးဇူးတော် ဂုဏ်တော်ကိုဖြစ်စေ၊ တရားတော် မြတ်၏ ကျေးဇူးတော် ဂုဏ်တော်ကိုဖြစ်စေ၊ သံဃာတော်များ၏ ကျေးဇူးတော် ဂုဏ်တော်ကိုဖြစ်စေ ဆင်ခြင်အောက်မေ့သည်ရှိသော် ကြောက်လန့်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်း ထခြင်းဟူသမျှ လုံးဝ မဖြစ်ပေါ်လတ္တံ့။
Posted by U Lawkanartha at 6/15/2008 07:44:00 PM Links to this post
အာဋာနာဋိယသုတ် ရွတ်ဖတ်ရခြင်း အကျိုးတရား
ဤသုတ်ကို မပြတ်ရွတ်ပေးလျှင် နတ်တို့က လိုလားသည်၊ နတ်လိုက လူလို၊ လူလိုက ဂြိုဟ်မ၊ ကံဇာတာ ထလာစေနိုင်သည်၊ စုန်းပယောဂ၊ တစ္ဆေ၊ မြေဖုတ်ဘီလူး ပူးကပ်လျှင် ဤသုတ်ဖြင့် ထုတ်ပြစ်နိုင်သည်၊ ပယောဂ ခွာဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပေသည်။ ဤသုတ်ကို ရွတ်ပေးလျှင် လူနာကို အပမမှီနိုင်ပေ။
၁။ အပ္ပဿန္နေဟိ နာထဿ၊ သာသနေ သာဓုသမ္မတေ။
၁။ သူတော်ကောင်းအပေါင်းက ကောင်းပါပေသည်ဟု လက္ခံ ချီးကျူးထားသော မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်ကိုပင် မကြည်ညို မသက်ဝင်နိုင်ကြသော လူကြမ်း၊ ဘီလူးတို့သည် ရက်စက်တတ်ကြကုန်၏။ မည်သည့်အခါမဆို နိုင်ထက်စီးနင်း နှိပ်စက်ကလူ ပြုတတ်ကြကုန်၏။
၂။ ပရိသာနံ စတဿန္နံ၊ အဟိံသာယ စ ဂုတ္တိယာ။
၂။ ထိုဘီလူးကြမ်းတို့က ပရိတ်သတ်ကို မညှဉ်းဆဲ မနှိပ်စက်နိုင်စေရန်နှင့် သူတို့ကပင် ကူညီစောင့်ရှောက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြီးမြတ်သော လုံ့လရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားက ဤအာဋာနာဋိယပရိတ် အရံအတားကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ယခုအခါ၌ ဤပရိတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုပေါင်း၍ ရွတ်ဆိုကြပါကုန်စို့။
၃။ ဝိပဿိဿ စ နမတ္ထု၊ စက္ခုမန္တဿ သိရီမတော။
၃။ စက္ခုငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုန်းကျက်သရေနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဝိပဿီမြတ်စွာဘုရားအား အကျွန်ုပ်၏ ဦးညွတ်ရှိခိုးခြင်း ဖြစ်ပါစေ၊ သတ္တဝါ အားလုံးအပေါ် ကြင်နာသနားမှုဖြင့် အစဉ်သနား စောင့်ရှောက်တော်မူသော သိခီ မြတ်စွာဘုရားအားလည်း အကျွန်ုပ်၏ ဦးညွတ်ရှိခိုးမှုဖြစ်ပါစေ။
၄။ ဝေဿဘုဿ စ နမတ္ထု၊ နှာတကဿ တပဿိနော။
၄။ မကောင်းမှု အညစ်အကြေးကို ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး ဖြစ်သော၊ ခြိုးခြံသောအကျင့်ကိုလည်း ကျင့်တော်မူသော ဝေဿဘူမြတ်စွာဘုရားအား လည်း အကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါ၏၊ မာရ်စစ်သည်အပေါင်းကို နှိမ်နင်းအောင်မြင်တော်မူ သော ကကုသန်မြတ်စွာဘုရားအားလည်း အကျွန်ုပ် ရှိခိုးပါ၏။
၅။ ကောဏာဂမနဿ နမတ္ထု၊ ဗြဟ္မဏဿ ဝုသီမတော။
၅။ မကောင်းမှုဟူသမျှ အပပြုပြီးသော ငါးပါးသောဝသီဘော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူ သော ကောဏာဂုံ မြတ်စွာဘုရားအားလည်း အကျွန်ုပ် ရှိခိုးပါ၏၊ ခပ်သိမ်းသော ကိလေသာတို့မှ လွတ်ကင်းတော်မူပြီးသော ကဿပမြတ်စွာဘုရားအားလည်း အကျွန်ုပ် ရှိခိုးပါ၏။
၆။ အင်္ဂီရသဿ နမတ္ထု၊ သကျပုတ္တဿ သိရီမတော။
၆။ ဂေါတမဘုရားရှင်သည် လူတို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှကို ပယ်ဖြောက်နိုင်စွမ်း ရှိသော တရားတော်မြတ်ကို ဟောကြားတော်မူပေ၏၊ ကိုယ်တော်မှလည်း အရောင်အဝါ ကွန့်မြူးဖြာယှက် ထွက်တော်မူ၏၊ ဘုန်းကျက်သရေနှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူပေ၏၊ သကျသာကီဝင်မင်းသားလည်း ဖြစ်တော်မူ၏၊ ထိုဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားအား အကျွန်ုပ်၏ ဦးညွတ်ရှိခိုးခြင်းသည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။
၇။ ယေ စာပိ နိဗ္ဗုတာ လောကေ၊ ယထာဘူတံ ဝိပဿိသုံ။
၇။ လောက၌ ငြိမ်းအေးကုန်ပြီးသော ဘုရားရှင် အဆူဆူတို့သည် ယထာ ဘူတကျကျ သိကုန်၏၊ ချောပစ်ကုန်းတိုက်သော စကားမျိုးကို မည်သည့်အခါမျှ ဆိုမိန့်တော်မမူ၊ ကြီးလည်း ကြီးမြတ်ကုန်၏၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်း ကင်းကုန်၏။
၈။ ဟိတံ ဒေဝမနုဿာနံ၊ ယံ နမဿန္တိ ဂေါတမံ။
၈။ ဝိဇ္ဇာသုံးပါး၊ ဝိဇ္ဇာရှစ်ပါး၊ စရဏတစ်ဆယ့်ငါးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူ၍ မြတ်လှစွာသော ရဲရင့်ခြင်းအတိရှိတော်မူသော နတ်လူတို့၏ အစီးအပွားကို ဆောင်တော်မူတတ်သော ဂေါတမနွယ်ဖွား ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကို ရှိခိုးဦးညွတ် ကြပါ ကုန်၏။
၉။ ဧတေ စညေ စ သမ္ဗုဒ္ဓါ၊ အနေကသတကောဋိယော။
၉။ ဝိပဿီ၊ သိခီ၊ ဝေဿဘူ၊ ကကုသန်၊ ကောဏာဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမဟူသော ဘုရားခုနှစ်ဆူတို့နှင့်တကွ အကုဋေမက များလှစွာသော ဘုရားရှင်အားလုံးတို့ သည် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ရဟန္တာများနှင့် တူတော်မမူကုန်၊ ဆိုခဲ့ပါ သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ချင်း သာ တူတော်မူကြကုန်၏၊ ဘုရားရှင် အားလုံးပင် တန်ခိုးဣဒ္ဓိ လွန်စွာကြီးမား ကြကုန်၏။
၁ဝ။ သဗ္ဗေ ဒသဗလူပေတာ၊ ဝေသာရဇ္ဇေဟု' ပါဂတာ။
၁ဝ။ ခပ်သိမ်းကုန်သော ဘုရားရှင်တို့သည် အားတော်ဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော် မူကြ၏၊ ရဲရင့်သော ဝေသာရဇ္ဇဉာဏ်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူကြ၏၊ မြတ်သော ယောက်ျား ဖြစ်တော်မူ၍ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရရှိကြောင်းဝန်ခံကြကုန်၏။
၁၁။ သီဟနာဒံ နဒန္တေ' တေ၊ ပရိသာသု ဝိသာရဒါ။
၁၁။ ဘုရားရှင်တို့မည်သည် ပရိသတ်ဗိုလ်ပုံအလယ်၌ လွန်စွာရဲရင့်တော်မူကြ၏။ ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်းကဲ့သို့ ရဲရဲ ရင့်ရင့်စကားဆိုကြ၏၊ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ မလည်မပတ်စေနိုင်သော ဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုလည်း လည်ပတ် စေကုန်၏။
၁၂။ ဥပေတာ ဗုဒ္ဓဓမ္မေဟိ၊ အဋ္ဌာရသဟိ နာယကာ။
၁၂။ ဘုရားရှင်တို့သည် လူသုံးပါးတို့၏ ခရီးလမ်းညွှန် ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရား၏ ကျေးဇူးတရား ဆယ့်ရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံကြကုန်၏။ သုံးဆယ့်နှစ်ပါးသော ယောက်ျားမြတ်တို့၏ လက္ခဏာတော်ကြီးတို့နှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူကြ၏။ လက္ခဏာတော်ငယ်ရှစ်ဆယ်နှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူကြ၏။
၁၃။ ဗျာမပ္ပဘာယ သုပ္ပဘာ၊ သဗ္ဗေ တေ မုနိကုဉ္ဇရာ။
၁၃။ ဘုရားရှင်ဟူသမျှ ကိုယ်တော်အလုံးမှ တလံမျှလောက် ရောင်ခြည်တော် အမြဲထွက်လျက်ရှိ၏၊ ရဟန်းဟူသမျှတို့ထက် ကြီးမြတ်၏၊ ခပ်သိမ်းသော တရားကိုလည်းသိ၏၊ ကိလေသာ အာသဝေါလည်း ကင်း၏၊ မာရ်ငါးပါးကိုလည်း အောင်ပြီးဖြစ်၏။
၁၄။ မဟာပဘာ မဟာတေဇာ၊ မဟာပညာ မဟဗ္ဗလာ။
၁၄။ ဘုရားရှင်တို့သည် များမြတ်သော ရောင်ခြည်တော်၊ ကြီးသောတန်ခိုး၊ ထွတ်မြတ်သောပညာ၊ စွမ်းသန်သောခွန် အား၊ အတိုင်းမသိသောကရုဏာ၊ စွဲမြဲသောလုံ့လတို့ကို ပိုင်တော်မူကြ၏၊ သတ္တဝါအများ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို လည်း ဆောင်တော်မူတတ်ကြကုန်၏။
၁၅။ ဒီပါ နာထာ ပတိဋ္ဌာ စ၊ တာဏာ လေဏာ စ ပါဏိနံ။
၁၅။ ဘုရားရှင်တို့သည် သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ မှီခိုရာကျွန်းလည်းဖြစ် ၏၊ ကိုးကွယ်ရာလည်းဖြစ်၏၊ တည်ရာလည်းဖြစ်၏၊ စောင့်ရှောက်ရာလည်း ဖြစ်၏၊ ဘေးအန္တရာယ်မှ ပုန်းကွယ်ရာလည်း ဖြစ်၏၊ လားရောက်ရာလည်း ဖြစ်၏၊ ဆွေမျိုးသဖွယ်လည်း ဖြစ်၏၊ အောက်မေ့ရာလည်း ဖြစ်၏၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ သည် မြတ်သောမှီရာလည်း မည်ပေ၏၊ သတ္တဝါတို့၏ အစီးအပွါးကိုလည်း ရှာကြံလေ့ရှိကြကုန်၏။
၁၆။ သဒေဝကဿ လောကဿ၊ သဗ္ဗေ ဧတေ ပရာယဏာ။
၁၆။ ထိုဘုရားရှင်တိုင်းသည် နတ်တို့၏လဲလျောင်းရာ၊ လူတို့၏မှီခိုရာ ဖြစ်ကြ ကုန်၏၊ အကျွန်ုပ်သည် ယောက်ျားဟူ သမျှတို့ထက် သာလွန်မြင့်မြတ်တော်မူ သော ထိုဘုရားရှင်တို့၏ ခြေတော်တို့ကို ဦးနှိမ်ရိုကျိုး ရှိခိုးပါ၏။
၁၇။ ဝစသာ မနသာ စေဝ၊ ဝန္ဒာမေ'တေ တထာဂတေ။
၁၇။ အကျွန်ုပ်သည် အိပ်နေသောအခါ၌ ဖြစ်စေ၊ ထိုင်နေ သောအခါ၌ ဖြစ်စေ၊ ရပ်နေသောအခါ၌ ဖြစ်စေ၊ လမ်းသွားနေသောအခါ၌ ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အခါ၌ မဆို ထိုဘုရားရှင်တို့အား နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း အမြဲမပြတ် ရှိခိုးပါ၏။
၁၈။ သဒါ သုခေန ရက္ခန္တု၊ ဗုဒ္ဓါ သန္တိကရာ တုဝံ။
၁၈။ ကိလေသာအပူအပေါင်းကို ငြိမ်းအေးအောင် ပြုတော် မူတတ်ကြကုန်သော ဘုရားရှင်တို့သည် သင့်ကို ချမ်းသာအောင် မပြတ်စောင့်ရှောက်ပါစေသတည်း။ ဘုရားရှင်တို့၏ အစောင့်အရှောက်ကို ခံယူရသော သင်သည် ငြိမ်သက် ချမ်းမြေ့ပါစေ၊ ဘေးအန္တရာယ်ခပ်သိမ်းမှ ကင်းလွတ်ပါစေ။
၁၉။ သဗ္ဗ ရောဂါ ဝိနီမုတ္တော၊ သဗ္ဗသန္တာပဝဇ္ဇိတော။
၁၉။ သင်သည် အနာမရှိ ပကတိကျန်းမာသူ၊ ပူပန်ခြင်း ကင်းသူ၊ ရန်သူဟူသမျှ ကို လွန်မြောက်နိုင်သူ၊ ငြိမ်းအေး ချမ်းမြေ့သူ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
၂ဝ။ တေသံ သစ္စေန သီလေန၊ ခန္တီမေတ္တာဗလေန စ။
၂ဝ။ ထိုဘုရားရှင်တို့သည် သီလ, သစ္စာ, ခန္တီ, မေတ္တာတို့၏ စွမ်းပကားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်သနား စောင့်ရှောက်ကြပါ စေကုန်သတည်း။
၂၁။ ပုရတ္ထိမသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊ သန္တိ ဘူတာ မဟိဒ္ဓိကာ။
၂၂။ ဒက္ခိဏသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊ သန္တိ ဒေဝါ မဟိဒ္ဓိကာ။
၂၃။ ပစ္ဆိမသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊ သန္တိ နာဂါ မဟိဒ္ဓိကာ။
၂၄။ ဥတ္တရသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊ သန္တိ ယက္ခာ မဟိဒ္ဓိကာ။
၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄။ အရှေ့မျက်နှာ အရပ်၌ တန်ခိုးကြီးသော ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့ ရှိကြကုန်၏၊ တောင်ဘက်အရပ်မျက်နှာ၌ တန်ခိုးကြီးသော ကုမ္ဘဏ်နတ်တို့ ရှိကြကုန်၏၊ အနောက် အရပ်မျက်နှာ၌ တန်ခိုးကြီးသော နဂါးတို့ ရှိကြကုန်၏၊ မြောက်ဘက်အရပ်မျက်နှာ၌ တန်ခိုးကြီးသော ဘီလူးတို့ ရှိကြကုန်၏၊ ထိုနတ်, နဂါး, ဘီလူးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်တစိုက် စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၅။ ပုရတ္ထိမေန ဓတရဋ္ဌော၊ ဒက္ခိဏေန ဝိရူဠှကော။
၂၅။ အရှေ့အရပ်မျက်နှာ၌ ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့ကို အစိုးရသော ဓတရဋ္ဌနတ်မင်း၊ တောင်အရပ်မျက်နှာ၌ ကုမ္ဘဏ်တို့ကို အစိုးရသော ဝိရူဠှကနတ်မင်း၊ အနောက်အရပ်မျက်နှာ၌ နဂါးတို့ကို အစိုးရသော ဝိရူပက္ခနတ်မင်း၊ မြောက်အရပ် မျက်နှာ၌ ဘီလူးတို့ကို အစိုးရသော ကုဝေရနတ်မင်း။
၂၆။ စတ္တာရော တေ မဟာရာဇာ၊ လောကပါလာ ယသဿိနော။
၂၆။ ထိုနတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့သည် လူတို့ကို စောင့်ရှောက်တတ်ကြ ကုန်၏၊ အခြွေအရံလည်း များကုန်၏၊ ထိုနတ်မင်းကြီးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိ ချမ်းသာအောင် အစဉ်မပြတ် စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန် သတည်း။
၂၇။ အာကာသဋ္ဌာ စ ဘူမဋ္ဌာ၊ ဒေဝါ နာဂါ မဟိဒ္ဓိကာ။
၂၇။ ကောင်းကင်၌တည်သော နတ်များ၊ မြေ၌တည်သော နတ်များ၊ နဂါးများ သည် တန်ခိုးအလွန်ကြီးကြသည်၊ ထိုတန်ခိုးကြီးနတ်နဂါးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်မပြတ် စောင့်ရှောက်ကြစေကုန်သတည်း။
၂၈။ ဣဒ္ဓိမန္တော စ ယေ ဒေဝါ၊ ဝသန္တာ ဣဓ သာသနေ။
၂၈။ တန်ခိုးကြီးသော နတ်တို့သည် ဤဘုရားသာသနာ၌ နေကြကုန်၏၊ ထိုသာသနာနတ်တို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်မပြတ် စောင့်ရှောက် ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၉။ သဗ္ဗီတိယော ဝိဝဇ္ဇန္တု၊ သောကော ရောဂေါ ဝိနဿတု။
၂၉။ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းစေကုန်သတည်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ ကင်းစေကုန် သတည်း၊ အနာရောဂါဟူသမျှ ပျောက်စေကုန်သတည်း၊ သင့်အား အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်စေသတည်း၊ ချမ်းချမ်းသာသာနှင့် အသက်ရှည်စွာ နေရပါစေ သတည်း။
၃ဝ။ အဘိဝါဒနသီလိဿ၊ နိစ္စံ ဝုဍ္ဎာပစာယိနော။
၃ဝ။ ရတနာမြတ်သုံးပါးအား ရိုသေစွာ ရှိခိုးဆည်းကပ်လေ့ ရှိသောသူ၊ သီလ ရှိသူ, သမာဓိရှိသူ, ပညာရှိသူတို့ကို အမြဲမပြတ် ရိုသေလေးစားတတ်သူသည် အသက်ရှည်၏၊ အဆင်းလှ၏၊ ချမ်းသာကြီးပွား၏၊ ခွန်အားဗလ တိုးတက် လေ၏၊ အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာကြီးခြင်း၊ ခွန်အားကြီးခြင်း ဟူသောတရားတို့သည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ ထာဝစဉ် တိုးတက်လျက်သာ နေကြကုန် သတည်း။
Posted by U Lawkanartha at 6/15/2008 06:48:00 PM Links to this post
မြတ်စွာဘုရားအား မစောင့်ရှောက်ရသောတရား ၄-ပါး-
သူယုတ်မာတို့၏ တရား ၇-ပါး-
လောက၌ မရှိသော အရာ ၃-ပါး-
သင်၏ အဝတ်တို့သည် သံပြားနှင့်အတူဖြစ်ပါစေ-
ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံ ခြားနားမှု ပြဿနာ-
လောင်းကစားခြင်း အပြစ် ၆-ပါး-
အဆွေခင်ပွန်းယုတ်၏ အပြစ် ၆-ပါး-
ပျင်းရိလေ့ရှိသူတို့၏ အကြောင်း ၆-ပါး-
လူကို ဖျက်ဆီးတတ်ကုန်သော အကြောင်း ၆-ပါး-
လူကို ဖျက်ဆီးတတ်သော အကြောင်း ၈-ပါး-
စိတ်ကောင်းမရှိသော မိတ်ဆွေယုတ် ၄-ယောက်-
မိတ်ဆွေယုတ်မှန်းသိရန် အကြောင်း ၄-ပါး-
စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း ရှိသော မိတ်ဆွေ ၄-ယောက်-
မိတ်ဆွေစစ်ဟုသိရန် အကြောင်း ၄-ပါး-
စည်းစိမ်တို့ကို လေးပုံ ခွဲဝေရာ၏-
အရပ် ခြောက်ပါးကို လုံခြုံစေခြင်း-
အစေအပါး အလုပ်သမားတို့ကို ပြုစုအပ်ကုန်၏-
'ရာဂ'ကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိရန်-
ဤတရား ၉-မျိုးတို့ကို ပယ်လျှင် ရဟန္တာဖြစ်ပါပြီ-